ကောင်းတယ်ဦးရဲ့ – Grab Love Story
ခင်မေချစ်ကို တစ်ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးက ဝိုင်းပယ်ထားသည်။ ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းမလုပ်ကြဟုဆိုလျှင် ခင်မေချစ် ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲဆိုတာ သိသွားနိုင်သည်။ နောက် ခင်မေချစ် ဘာတွေမှားခဲ့သလဲဟုလည်း စဉ်းစားစရာဖြစ်လာရ သည်။ မှန်သည်။ ခင်မေချစ်က အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးက ခွင့်မလွှတ်နိုင်သော အမှားကို ကျူးလွန်မိခဲ့သည်။ ဦးခင်ဝင်းနှင့် ဒေါ်မေသစ်တို့မှာ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲတွင် ရတနာဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားသည့် ရတနာကုန်သည်တွေဖြစ်သည်။ သူတို့တွင် တစ်ဦး တည်းသော သမီးလေး တစ်ယောက်ထဲရှိသည်။ သူကတော့ ခင်မေချစ် ပင်ဖြစ်သည်။ စီးပွားကလည်း ချမ်းသာ၊ မိသားစုသုံးယောက်စလုံးကလည်း ကျန်းမာဆိုတော့ သူတို့မိသားစုလေးသည် ပျော်ရွှင်ချမ်း မြေ့စရာကောင်းလှသည်။ ဒါပေမယ့် ခင်မေချစ် အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ်တွင်တော့ သူတို့မိသားစုလေး ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခဲ့ရ သည်။ ဒါကလည်း ခင်မေချစ် ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပုံက ခင်မေချစ်က သူ့ထက်အသက်(၁၀)နှစ်လောက်ကြီးသော အရက်သမားတစ်ယောက်နှင့် လိုက်ပြေးသွားခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ကြည့်ဦး။ ခင်မေချစ် ယူလိုက်တာက လူပျိုလူ လွတ်မဟုတ်၊ ကလေးတစ်ယောက်အဖေ တစ်ခုလပ်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးခင်ဝင်း ခမျာ သမီးကို ရှာလည်းမရှာ၊ ပြန်လည်း လက်မခံတော့ဘဲ ပစ်ထားခဲ့ပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကြီးစွာဖြင့် အရက်၏ ကျေးကျွန်ဖြစ်လာခဲ့ရ သည်။ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မေသစ်ကတော့ သမီးဖြစ်သူ ခင်မေချစ်အား တွေ့အောင်ရှာ၍ လင်ဖြစ်သူမသိအောင် ခိုးဝှက်၍ ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ နောက်သုံးနှစ်မျှကြာသောအချိန်တွင် ဦးခင်ဝင်းမှာ အရက်ကြောင့် ဘဝဆုံးသွားခဲ့ရသည်။ ဒေါ်မေသစ်က သမီးဖြစ် သူကို အိမ်သို့ပြန်ခေါ်၍ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးတွင် အထည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ကျန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချထုခွဲလှူဒါန်းပြီး သူမကိုယ်တိုင် စစ်ကိုင်းချောင်တွင် ယောဂီဝတ်သွားတော့သည်။ ဝဋ်ကြွေးဆိုတာက မနေပါ။ အိမ်ထောင်သက် (၁၀)နှစ် အရောက်မှာပင် ခင်မေချစ် ယောက်ျားစံထူးမှာ အရက်ကြောင့်ပင် ဆုံးပါးသွားခဲ့ရသည်။
ဒီတော့ ခင်မေချစ်မှာ လင်ပါသမီး သဲအိဖြူနှင့်အတူ ဘဝကိုရင်ဆိုင်ရတော့သည်။ စံထူး ဆုံးသွားချိန်တွင် ခင်မေချစ်မှာ အသက်(၂၈)နှစ်ပင်ရှိသေးပြီး လင်ပါသမီးဖြစ်သူ သဲအိဖြူမှာ အသက်(၁၈)နှစ် ထဲရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ခင်မေချစ်မှာ စံထူးနှင့်သားသမီး မထွန်းကားလေတော့ သဲအိဖြူကို သမီးတစ်ယောက်လို၊ ညီမလေး တစ်ယောက်လို ချစ်ရှာသည်။ သူမနှင့်စံထူးတို့ ညားချိန်တွင် သဲအိဖြူမှာ အသက်(၈)နှစ်သာရှိသေး၍ သဲအိဖြူမှာ ခင်မေချစ်လက်ပေါ်မှာပင် ပြုစုယုယမှုအောက်မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည်။ သဲအိဖြူမှာ မိခင်မေတ္တာကို ငတ်ခဲ့ရသူတစ်ယောက် ဖြစ်၍လည်း ခင်မေချစ်ကို မိခင်တစ်ယောက်လို ချစ်ရှာ ခင်ရှာပါသည်။ အခုဆိုလျှင် သဲအိဖြူမှာ တက္ကသိုလ်သို့ပင် ရောက်၍ နေပြီဖြစ်သည်။ မုဆိုးမလေး ခင်မေချစ်က အသက်(၂၈)နှစ်သာ ရှိသေးလေတော့ ကာမအာရုံညွှတ်ကွင်းက မကင်းလွတ်နိုင်ပါ။ ကြိုး ချင်းထား ကြိုးချင်းငြိဆိုသလို အရောင်းအဝယ် ကိစ္စပတ်သက်နေသော ဆိုင်နီးနားချင်း မောင်မောင်ဦး ဆိုသော လူတစ် ယောက်နှင့် ငြိတော့သည်။ မောင်မောင်ဦးမှာ ခင်မေချစ်ထက် အသက်(၁၀)နှစ်လောက်ကြီးပြီး အသက်(၄၀)နီးပါးလောက်ရှိ ပြီဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်မရှိသော လူပျိုကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ခင်မေချစ်နှင့် ဆိုင်နီးနားချင်းဆိုပေမယ့် မောင်မောင်ဦးမှာ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တော့ မဟုတ်ပါ။ အမဖြစ်သူ၏ ဆိုင်တွင် ဝိုင်းဝန်းရောင်းချပေးနေသော သူသာဖြစ်လေသည်။ မောင်မောင်ဦးနှင့် ခင်မေချစ်တို့မှာ အပြင်တွင်တွဲ၍ အားမရနိုင်တော့ဘဲ ညဖက် ခင်မေချစ်၏ အိမ်သို့လာ၍ အိပ်သည်အထိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သမီးဖြစ်သူမှာ လင်ပါသမီးဖြစ်၍ ခင်မေချစ် စိတ်ထဲသိပ်ပြီး အလေးမထားတာလည်း ပါသည်။ မောင်မောင်ဦးလာအိပ်လျှင် သီးသန့်အခန်းတစ်ခန်းနှင့် သူ့ကိုသိပ်သည်။ ခင်မေချစ်က တစ်ခန်း၊ သဲအိဖြူက တစ်ခန်း သပ်သပ်စီအိပ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နေပါ့မလဲ။ သဲအိဖြူဆိုတာက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်နေပြီ။ ရည်းစားပင် နှစ်ယောက်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဒီတော့ မောင်မောင်ဦးနှင့် ခင်မေချစ်တို့ အခြေအနေကို သဲအိဖြူ ကောင်းကောင်းသိသည်ပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးက တစ်ပတ်တွင် တနင်္ဂနွေနေ့ တစ်ရက်ထဲသာ ပိတ်သည်။ ထိုပိတ်ရက်တွင် မောင်မောင်ဦးနှင့် ခင်မေချစ်တို့မှာ တစ်နေကုန် အပြင်တွင်တွဲပြီး ညကျ မောင်မောင်ဦးက အိမ်သို့ပါ၍ လာတတ်သည်။
များသောအားဖြင့် အိမ်တွင်က သဲအိဖြူတစ်ယောက်ထဲသာရှိတာများသည်။ ခါတိုင်း တနင်္ဂနွေနေ့တွေဆိုလျှင် သဲအိဖြူ အပြင်ထွက်၍ လည်တတ်ပေမယ့် ဒီတနင်္ဂနွေတော့ သူငယ်ချင်း ချိုရီအေးတို့ အတွဲလာလည်မည်ဖြစ်သဖြင့် အပြင်သို့ မထွက်ဖြစ်ပေ။ “ တီ…..တီ…..တီ….” ခြံဝမှ ဘဲလ်မြည်သံကြောင့် သဲအိဖြူ အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းလာခဲ့သည်။ ထင်သည့်အတိုင်းပင် ခြံဝတွင် ဟိုနှစ်ယောက် ရောက်နေပြီ။ ချိုရီအေးနှင့် သူ့အကောင် စိုးကျော်မိုး တို့ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သူတို့မှာ သဲအိဖြူနှင့် တစ်တန်းထဲသားတွေဖြစ် သည်။ “ ဟဲ့ ကောင်တွေ….နောက်ကျလိုက်တာ…” “ သူ့စောင့်နေရတာ….သူမလာလို့ နောက်ကျနေတာ….” စိုးကျော်မိုးက ချိုရီအေးကို မေးငေါ့ပြ၍ ပြောသည်။ “ မိန်းကလေးဟ…..ထွက်ချင်တိုင်း ထွက်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူး…..နောက်ကျမှာပေါ့…..” ချိုရီအေးကလည်း ချက်ချင်းတုန့်ပြန်သည်။ “ ထွက်ချင်ရင် ပြောရောပေါ့….” စိုးကျော်မိုးက မကြားတကြားလေးပြောသည်။ “ ဟဲ့…..ဘာတွေမှန်းလဲမသိဘူး….အိမ်ထဲသွားမယ်…” သဲအိဖြူ မျက်နှာလေးရဲသွားသည်။ ရည်းစားနှစ်ယောက်ပြောင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့လောက်ကြီးတော့ စည်းလွတ်ဝါးလွတ် မနေခဲ့ဘူးပါ။ မျက်နှာကို နမ်းတာ၊ နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်တာ၊ အဝတ်အစားတွေပေါ်ကနေ နို့လေးတွေ တင်ပါးလေးတွေကို ဖွဖွလေးကိုင်တာလောက်ပဲ ခံဖူးခဲ့တာဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်ယောက်ကတော့ လင်မယားတောင်ဖြစ်နေပြီ လားမသိပေ။ ခုပဲကြည့် အိမ်ထဲရောက်သည်နှင့် သဲအိဖြူကိုမှ အားမနာတော့ဘဲ စိုးကျော်မိုးက ချိုရီအေးလက်ကိုဆွဲပြီး အခန်းတစ်ခန်းထဲ အတင်းဆွဲခေါ်သွားသည်။ “ ဟဲ့ ဟဲ့…..အဲ့ဒါ ဘွားတော်ကြီးအခန်း….ဟိုဖက်က ငါ့အခန်းထဲကိုဝင်….” ဒီတော့မှ ခြေလှမ်းပြန်ဆုတ်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက် သဲအိဖြူအခန်းထဲ ဝင်သွားကြသည်။ သဲအိဖြူ အိမ်ရှေ့ခန်းမှ ဆက်တီပေါ်သို့ ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချမိလိုက်ပြီး လေပူတစ်ချက်ဟူးကနဲ မှုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်မိသည်။ ဒီကောင်နှစ်ကောင် မပြန်မချင်း ဘယ်ကိုသွားနေရလျှင် ကောင်းမလဲလို့ သဲအိဖြူ စဉ်းစားသည်။ ခဏအတွင်း အဖြေတစ်ခုကို သဲအိဖြူ စဉ်းစားမိ လိုက်ပြီ။ ထိုင်ရာမှထကာ ချိုရီအေးနှင့် စိုးကျော်မိုးတို့ဝင်သွားသည့် သူမ၏အိပ်ခန်းဖက်ဆီသို့ ဦးတည်လိုက်လေသည်။ (၃) ချိုရီအေး ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတွင် အင်္ကျီများ မရှိတော့ပေ။
ဖြူဝင်းသောအသားလေးများနှင့် နို့လေးများက ပေါ်လွင် ထင်ရှားနေသည်။ စွင့်ကားသော တင်ပါးဖွေးဖွေးကြီးများမှာလည်း ထဘီက ခါးသို့လိပ်တင်၍ ညှပ်ထားသဖြင့် လွတ်လွတ်လပ် လပ်ကြီးပေါ်၍နေသည်။ စိုးကျော်မိုးက ပက်လက်အနေအထား၊ ပုဆိုးက ခါးသို့မ တင်ထားတော့ ကြီးမားနီရဲသော ဒစ်ပြဲပြဲကြီး က ချိုရီအေး၏ ဖင်ကြီးဘေးမှ ကပ်၍ထောင်နေသည်။ စိုးကျော်မိုး၏ လက်များက ချိုရီအေး၏ နို့လေးများကို ပွတ်သပ်၍ ပေး နေသည်။ နှစ်ယောက်စလုံးမှာ သူတို့ပိတ်မထားခဲ့သည့် ဟနေသော တံခါးရွက်ကြားမှ ကြည့်နေသော သဲအိဖြူကို သတိမ ထားမိကြပေ။ ချိုရီအေးက စိုးကျော်မိုး၏ လီးကြီးကို ငုံ့ကြည့်ပြီး ဖင်လေးကြွကာ သူမစောက်ပတ်ဝလေးထဲသို့ တေ့သွင်းကာ ထိုင်ချလိုက်သည်။ “အ…..အား….ကျင်တက်သွားတာပဲ…..သူ့ဟာကြီးက သံချောင်းကြီးကျနေတာပဲ……အဟင်း…..” ချိုရီအေးက စိုးကျော်မိုး၏ လက်မောင်းကို ပုတ်၍ပြောသည်။ ချိုရီအေး ဖင်ကြီးကိုကြွကာ ချကာဖြင့် အပေါ်မှတက်၍ လိုးပေးနေသည်။ သဲအိဖြူ ကြည့်ရင်း အာခေါင်တွေခြောက်၍လာသည်။ ရင်ထဲ၌ လှိုက်မော၍ ခံချင်စိတ်များ ပြင်းထန်၍လာသည်။ ချိုရီအေး ဆောင့်ချက်တွေက တဖြေးဖြေးသွက်သွက် လာသည်။ “ ရီအေး….” “ ဟင်း…အ….အား….ဘာလဲ….အရေးထဲမှာ….” ချိုရီအေး၏ တင်သားကြီးများက စိုးကျော်မိုး၏ ပေါင်နှစ်လုံးပေါ်ဖိချပြီး ထိုင်ချလိုက်တိုင်း ပြားပြားသွားသည်။ “ ကဲ….ဘာပြောမလို့လဲ….” “ ကို…အားမရတော့ဘူး…..” “ အ….အား…..ကျွတ်….ကျွတ်….ကို့ဟာကြီးကကွာ…..ဟင်း…..တစ်ချက် တစ်ချက် အထဲမှာ ကျင်တက်သွား တာပဲ…..” “ ညောင်းပြီကွာ…..ကို လုပ်ပေးတော့….” ပြောပြီး ချိုရီအေးက အပေါ်မှဆင်းကာ ဘေးတွင် တုံးလုံးလေးဝင်လှဲလိုက်သည်။ သူမလှဲပုံက စိုးကျော်မိုးဖက်သို့ စောင်း၍ ကွေးကွေးလေးဖြစ်နေသည်။ စိတ်ရှိသလို ဆောင့်ထားသောကြောင့် မောနေပုံလည်းရသည်။ စိုးကျော်မိုးထ၍လာ သည်။ ချိုရီအေးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။ “ ရီအေး….အဲဒီအတိုင်းနေ….” စိုးကျော်မိုးက ချိုရီအေး၏ နောက်ဖက်သို့ ပြောင်းလိုက်သည်။
သဘောပေါက်သွားပုံရသော ချိုရီအေးက သူမ၏ကွေး ဒူးနှစ်ဖက်ကို ပိုကွေးပြီး ရင်ခွင်ထဲထိ ရင်ဘတ်နှင့်ထိအောင် ကွေး၍ တစောင်းလေး အိပ်ပေးသည်။ စိုးကျော်မိုးက ချိုရီအေး၏ ကျောနားတွင် ကပ်ပြီးအိပ်သည်။ ကွေးနိုင်သလောက် ကွေး၍ထားသော ချိုရီအေး၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ တင်းမာပြောင်လက် သော ပန်းနုရောင်စောက်ဖုတ်လေးက ပြူးပြီးထွက်နေသည်။ ဒစ်ပြဲကြီးက စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကို လျှောတိုက်ပွတ် ဆွဲနေရာ စောက်ဖုတ်လေးမှာ ရွစိရွစိဖြစ်ကာ ခံချင်စိတ်တွေက တားမရအောင်ဖြစ်၍လာသည်။ ချိုရီအေးမှာ တင်ပါးလေးကို နောက်သို့တိုးတိုး ကော့ပစ်ပေးနေသည်။ “ လုပ်တော့ကွာ…..ကိုကလည်း ဘာမှန်းလဲမသိဘူး…..” “ ခံချင်လာပြီလား….” “ အင်းပေါ့….ကျွတ်…..လုပ်မယ့်ဟာပဲ….” ချိုရီအေး စိတ်မရှည်နိုင်တော့ပေ။ အရေတွေကလည်း တားမနိုင်စီးမရထွက်လာကြပြီ။ စိုးကျော်မိုးက သူ့လီးဒစ်ပြဲကြီး ကို ကိုင်ပြီး ချိုရီအေး၏ စောက်ပတ်အဝသို့ တေ့ပြီးသွင်းလိုက်သည်။ “အင်း….အား….လား..လား….ကျွတ်…..ကျွတ်….အင်း…..” ချိုရီအေး၏ မျက်တောင်ကော့ကြီးများ မှေးစင်းကျသွားပြီး နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို တင်းတင်းစေ့ကာ အံလေးကြိတ်ပြီး ရှုံ့မဲ့ပြီးငြီးသည်။ လီးတုတ်တုတ်ကြီးက ချိုရီအေး၏ စောက်ပတ်လေးထဲ ပြည့်ကြပ်ပြွတ်သိပ်နေသည်။ သဲအိဖြူ၏ မြင်ကွင်းတွေက ရှင်း၍နေသည်။ လီးအဝင်အထွက်၊ စောက်ပတ်လေး၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ပြတ်သားစွာ မြင်နေရသည်။ “အင့်….အင့်….အင်း….အား…..အင့်…..” လီးကြီးက မှန်မှန်ဝင်ထွက်နေရာမှ တခါတလေ သွက်သွက်ခါသွားအောင် ဆောင့်ဆောင့်ပစ်လိုက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ “ အ….အ….အား….အီး…..ဖြေးဖြေး ကိုရယ်…..နာတယ်….ကွာ….အဟင်း…..သူသိပ်ကြမ်းတာပဲကွာ……” ချိုရီအေး ရှုံ့မဲ့မဲ့လေး ပြောသည်။ “ ရီအေး မကောင်းဘူးလား…..” “ ဟင်း…ဟင့်အင်း….ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ပဲ ကောင်းတာ….အရသာရှိတာ….” သူတို့နှစ်ယောက်မှာ လေသံမျှဖြင့်သာ ကြိတ်၍ ပြောဆိုနေကြသော်လည်း သဲအိဖြူ ရှင်းလင်းပီသစွာ ကြားနေရ သည်။ စောက်ရည်များ စိုစိုစိစိလေးဖြင့် ယား၍ယား၍ လာသည်။
ချိုရီအေး၏ စောက်ပတ်မှာ အရည်တရွှဲရွှဲဖြင့် စောက်စိလေး မှာ ညိုညိုလေး၊ လီးကြီးအပြင်သို့ ထွက်လာတိုင်း ဒစ်ပြဲပြဲကြီးက နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို ချိတ်ချိတ်ဖြဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီး ရဲကနဲ ရဲကနဲ ပြဲပြဲသွားသည်မှာ မြင်နေရသော သဲအိဖြူ ဝင်ခံပစ်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာသည်။ “ အူး….အင်း…..ထွက်…..ထွက်ကုန်ပြီ….အား…..အား….” ပြောလည်းပြော ချိုရီအေးက အလောတကြီးဟန်ဖြင့် စိုးကျော်မိုး၏ ခါးကြီးကို လက်ပြန်ကိုင်လိုက်ပြီး ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ဖိ၍ဖိ၍ ဆောင့်ပစ်လိုက်သည်။ “ အားရပါးရ….ဆောင့်စမ်းပါ ကိုရယ်….ရှီး….ကျွတ်….ကျွတ်….” စိုးကျော်မိုးက ပုဇွန်တုတ်ကွေးပုံစံကနေ ရုတ်တရက် ဒူးထောက်လိုက်ပြီး တပေါင်ကျော်အနေအထားပြင်ကာ တအား ကြုံးဆောင့်တော့သည်။ “အား….အ….အား….” လီးတုတ်တုတ်ကြီးက အဆုံးထိနစ်နစ်ဝင်သွားရုံမျှမက ဂွေးအုကြီးများပါ ဝင်သွားမလားထင်ရလောက်သည်။ စိုးကျော်မိုး၏ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်လွန်းလှသည်။ ချိုရီအေး၏ ပေါင်နှစ်လုံးမှာ အပြဲဆုံး အကားဆုံး အနေအထားသို့ ရောက်၍နေရာ လီးကြီးမှာ အရင်းစိုက်သည်အထိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးဝင်နိုင်နေသည်။ “ အား….အ….အား….” လီးကြီးကို ဆက်တိုက်ကြီးအစွမ်းကုန်လိုးထည့်နေရင်း စိုးကျော်မိုး၏ ကိုယ်လုံးကြီးမှာ ဆန့်ငင် ဆန့်ငင်နှင့် ဖြစ်သွားရ လေတော့သည်။ သူမချောင်းနေတာတွေ့မည်စိုးရိမ်သဖြင့် သဲအိဖြူ နီးရာအခန်းထဲဝင်၍ တံခါးပိတ်ထားလိုက်သည်။ သူဝင်လိုက်မိ သောအခန်းက မောင်မောင်ဦး အိမ်သို့လာသည့်အခါ အိပ်သည့်အခန်းဖြစ်နေသည်။ သဲအိဖြူ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်လိုက်တိုင်း အရည်ကြည်တို့က ပေါင်တွင်းသားလေးများပေါ် စီးစီးကျပြီး စိုစိစိဖြစ်နေသည်။ မောင်မောင်ဦးလာတိုင်း အမြဲအိပ်သည့် ကုတင်ပေါ်ရှိ အိပ်ယာကိုကြည့်ရင်း သဲအိဖြူ စိတ်တွေတမျိုးဖြစ်လာသည်။ အိပ်ယာပေါ်ပြေးတက်ပြီး တကိုယ်လုံး လူးလိမ့်ပစ် လိုက်သည်။ သဲအိဖြူ စိတ်ထဲတွင် အတော်လေး ကျေနပ်သလိုဖြစ်သွားသည်။ ဒီအိပ်ယာက ယောက်ျားတစ်ယောက်အမြဲအိပ် ခဲ့သည့် အိပ်ယာဖြစ်ကာ ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ အငွေ့အသက်များဖြင့် သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်အား ရစ်ပတ်လွှမ်းခြုံပစ်လိုက် သည်ဟု သူမ၏ စိတ်ထဲတွင် ကာမစိတ်တွေထ၍နေစဉ် ကျေနပ်စွာ ခံစားမိနေသည်။ လူးလှိမ့်ပြီးသွားတော့ မောမောနှင့် အိပ်ယာပေါ်တွင် ပက်လက်လေးနေရင်း ခေါင်းအုံးဘေးတွင် ခေါက်၍ ထပ်ထားသော မောင်မောင်ဦးဝတ်သည့် ပုဆိုးဟောင်းလေး နှစ်ထည်ကို တွေ့လိုက်သည်။ တစ်ထည်ကိုယူလိုက်ပြီး သူမ၏မျက်နှာပေါ်အုပ် တင်ကာ အားရပါးရနမ်းပစ်လိုက်သည်။ စိတ်ထဲတွင် အတော်အားရပါးရ ရှိသွားသည်။ ပြီးတော့ ထဘီကိုလှန်၍ သူမ၏ စောက်ပတ်လေးပေါ် လက်တစ်ဖက်တင်ပြီး တဖြေးဖြေးပွတ်နေမိသည်။ စောက်ပတ်ထဲမှ စောက်ရည်တွေကလည်း တစိမ့်စိမ့် နှင့် ထွက်ကျလာသည်။ သဲအိဖြူ မနေနိုင်လောက်အောင် ကာမစိတ်ဆန္ဒတွေ ပြင်းထန်လာရသည်။
စောက်ပတ်ပေါ်မှ တဖြေးဖြေးချင်းပွတ်နေသောလက်မှာ မြန်ဆန်သွက်လက်လာသည်။ လက်တဖက်က မျက်နှာပေါ်အုပ်ထားသော ပုဆိုးကို ကိုင်၍ အားရပါးရ နမ်းရှိုက်လိုက်သည်။ သဲအိဖြူ တစ်ယောက် စိတ်ကိုလွတ်လိုက်ကာ အခန်းထဲတွင် စိတ်ထင်တိုင်းကျဲနေသည်။ စောက်ပတ်အတွင်းဘက် မှ ယားယားတက်လာပြီး စောက်ပတ်ပေါ်မှ ဖိပွတ်နေရတာကိုပင် အားမရနိုင်တော့ပေ။ မျက်နှာပေါ်မှ ပုဆိုးကို ကိုင်ထားသော လက်တဖက်မှာ နို့အုံပေါ်သို့ရောက်လာပြီး နို့အုံတွေကို ဆုပ်ချေနေမိသည်။ စောက်ပတ်ထဲသို့ လက်ခလယ်ထိုးထည့်ကာ လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် စောက်စိကို ပွတ်ချေရင်း စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထည့်ထားသော လက်ခလယ်ကို ထုတ်ချီသွင်းချီလုပ် နေမိသည်။ တဖြေးဖြေး ကာမဆန္ဒတို့ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်လာကာ စောက်ပတ်ထဲသို့ ထုတ်ချီသွင်းချီလုပ်နေသော လက်ခလယ်ကို ခပ်သွက်သွက်လေး အချက်နှစ်ဆယ်လောက် ဆောင့်ကာ ဆောင့်ကာ အသွင်းအထုတ်လုပ်ပြီးနောက် သဲအိဖြူ တကိုယ်လုံးတုန်တက်လာကာ အိပ်ယာပေါ်မှ တင်ပါးကြီးတွေ ကော့တက်လာပြီး စောက်ပတ်ထဲမှ စောက်ရည်တွေ ပြစ်ခနဲ ပြစ်ခနဲ တရဟောထွက်ကျလာကာ ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချသံနှင့်အတူ ငြိမ်ကျသွားသည်။ စိတ်ထဲတွင် ကျေနပ်အားရစွာ တစ်ချီပြီးသွားသည့်အတွက်လည်း မောသွားသလိုခံစားရသည်။ သူမ၏ စောက်ပတ်လေးအရှေ့ ပိုင်း၊ ပေါင်ခြံနှင့် အိပ်ယာပေါ်တွင် ပေကျံကပ်ညိသွားသည့် စောက်ရည်တွေကို ပုဆိုးနှင့်ပွတ်၍ ဖြေးဖြေးချင်းသုတ်ရင်း အရသာခံကာ အမောဖြေနေမိသည်။ အတန်ငယ်ကြာတော့မှ စောက်ရည်တွေရွှဲနစ်၍ အရည်တွေ ကွက်နေသော ပုဆိုးကို ပြန်ခေါက်ပြီး မူလနေရာတွင် ပြန်၍ထားလိုက်သည်။ သဲအိဖြူ အခန်းထဲမှ ထွက်လာတော့ စိုးကျော်မိုးနှင့် ချိုရီအေးတို့ကို မတွေ့တော့ပေ။ အခန်းထဲတွင် တစ်ယောက်ထဲ စိတ်ထင်တိုင်းကျဲနေမိတာမို့ ဘယ်အချိန်က ပြန်သွားသည်မသိပေ။ “ ကိုမောင်……မေချစ်ကို လက်ထပ်ပြီး ဒီမှာတစ်ခါထဲ လာနေလိုက်ပါလားဟင်….” အခန်းချင်းကပ်ရက်က အသံခပ်သဲ့သဲ့ဖြင့် ကြားလိုက်ရသော သဲအိဖြူတစ်ယောက် ခေါင်းထောင်၍ သွားသည်။ ဦးမောင်မောင်ဦးဆိုသည့် လူကြီးက ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းနေလဲမသိဘူး။ မာမီလေးက အပိုင်ယူချင်နေပြီ။ “ လက်ထပ်မှာပေါ့ မေချစ်ရဲ့…..ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းကြီးတော့ မဟုတ်သေးဘူး…..အိမ်က မမကြီးတို့ကိုလည်း နားချရအုံးမှာ…..” “ အဟင့်….ကိုမောင့် လက်ကြီးကလည်းကွာ….နေ့ခင်းကလည်း တည်းခိုခန်းဝင်ပြီး နှစ်ချီတောင်လုပ်ထားတာ…..ခု လုပ်အုံးမလို့လား…..” “ မေချစ်က အရမ်းကို လုပ်ချင်စရာကောင်းနေတာကိုး…..” “ ဟင့်….တော်ပြီကွာ…..ဒီညတော့ မေချစ်မခံနိုင်တော့ဘူး…..နေ့ခင်းက သူကနှစ်ချီဆိုပေမယ့် မေချစ်က သုံးချီ တောင်ပြီးထားတာ…..အရမ်းအိပ်ချင်နေပြီကွာ…..” သဲအိဖြူမှာ သူမသတိမထားလိုက်မိစဉ်မှာပင် ဖောင်းထ၍လာသော စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ အရည်ကြည်လေးတွေ စိုစိ၍ထွက်လာသည်။
“ မေချစ်ကလည်းကွာ…..ခဏလေးပဲဟာ…..” “ ဟင့်အင်းကွာ…..မရဘူး….သွားအိပ်တော့မယ်…..ဒါကြောင့် နေ့ခင်းကပြောတာ…..ညကျမှ လုပ်ပါလို့…..” အမှန်တော့ မေချစ်မှာ စိတ်ထဲတွင် ခံချင်စိတ်က ရှိနေသော်လည်း နေ့လည်က တည်းခိုခန်းတွင် သုံးချီလောက်ပြီး ထားခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့် တော်လောက်ပြီဟု သူမကိုယ်သူမ ယူဆထားသည်။ ဒီကိစ္စကလွန်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်အလှအပကို ထိခိုက် နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ယောက်ျားတွေဆိုတာက သူတို့လိုသမျှပေးနေလျှင် တန်ဘိုးမထားတတ်။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းတော့ အစ် ထားရမည်။ ဒီလိုအစ်ထားလိုက်တော့မှ သူတို့လိုးချင်စိတ်တွေက ပြင်းသထက်ပြင်းလာပြီး မိန်းမအပေါ် အလေးထားဂရုတ စိုက် ရှိလာတတ်ကြသည်။ “ ဖယ်တော့ ကိုမောင်ရယ်…..မေချစ် အရမ်းကို အိပ်ချင်နေပြီကွာ…..” “ ခဏလေး….” “ အွန့်….” အသံကြားလိုက်ရုံဖြင့် နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သဲအိဖြူ အတတ်သိလိုက်သည်။ အတော်စုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေပဲ ဆယ်မိနစ်နီးပါးလောက်ကို ငြိမ်၍ကျသွားကြသည်။ “ ပြွတ်…” “ အင်း….အိပ်တော့နော် ကိုမောင်…..အားမွေးထား တစ်ရက်နှစ်ရက်နေတော့ ကိုမောင်မနေနိုင်ရင် ဆိုင်ကနေ တည်းခိုခန်းသွားကြတာပေါ့…..” “ အင်း….” အခန်းထဲမှ လှုပ်ရှားသံများကြားလိုက်ရသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် မာမီလေး၏ အိပ်ခန်းတံခါးပိတ်သံကြားလိုက်ရ သည်။ သဲအိဖြူ အိပ်မပျော်နိုင်တော့ပါ။ ဒီနေ့ တွေ့ရကြားရမြင်ရတာတွေက သဲအိဖြူ၏ သွေးသားတွေကို နှိပ်စက်၍နေသည်။ နေ့ခင်းကလည်း ဟိုစုံတွဲလုပ်ကြတာကို ကြည့်ပြီး စိတ်တွေထကြွလာကာ မနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာတာမို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အာသာဖြေရင်း တစ်ချီပြီးခဲ့ရပြီးပြီ။ နေ့ခင်းက မောင်မောင်ဦးအခန်းထဲမှာ စိတ်ထင်တိုင်း အာသာဖြေရင်း မောင်မောင်ဦးဝတ်သည့် ပုဆိုးနှင့် စောက်ရည်တွေကို သုတ်ခဲ့မိသည့်အတွက် သဲအိဖြူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလုံမလဲဖြစ်နေသည်။ သူသုတ်ခဲ့လိုက်သည့်အချိန်မှာ အရည်တွေက မခြောက်သေးပဲ စိုရွှဲပြီး ပုဆိုးမှာ ကွက်နေသည်။ နေ့ခင်းကဖြစ်သည့်အတွက် အရည်တွေ ခြောက်သွားလောက်ပြီဖြစ်ပေမယ့် ပုဆိုးမှာ ညီစို့စို့အနံ့တွေ နံနေမှာသေချာသည်။ နေ့ခင်းက ကြည့်ခဲ့မိတာတွေ ကိုယ်ဟာကိုယ် စိတ်ဖြေခဲ့တာတွေ မောင်မောင်ဦး ပုဆိုးနဲ့ စောက်ရည်တွေသုတ်ခဲ့မိတာတွေ မောင်မောင်ဦး ရိပ်မိသွားမလား ဆိုတာတွေကို တွေးရင်း ရင်တွေခုန်လာကာ စိတ်တွေပြန်လည်ထကြွလာသည်။
တစ်အိမ်လုံးက တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်။ စိတ်တွေ ထလွန်းမက ထလာသဖြင့် သဲအိဖြူ စောက်ပတ်လေးကို ပွတ်လိုက်၊ စောက်စေ့လေးကို ကလိလိုက်နှင့် လုပ်ပေးနေသည်။ အတန်ကြာအောင် လုပ်ပေးနေပေမယ့် သဲအိဖြူ၏စိတ်တွေ က ငြိမ်၍မသွား။ ပို၍ပင် ဆိုးလာသေးသည်။ သဲအိဖြူ စောက်ဖုတ်ပေါ်မှ လက်ကိုဖယ်ကာ ထဘီကိုပြန်၍အုပ်ကိုင်ပြီး ဘယ်လို လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဟု စဉ်းစားနေမိသည်။ အတန်ငယ်ကြာတော့ သဲအိဖြူ အိပ်ယာပေါ်မှ ထပြီးအခန်းအပြင်သို့ ထွက်လာခဲ့ သည်။ ဦးမောင်မောင်ဦး အခန်းရှေ့အရောက် ကြည့်လိုက်တော့ တံခါးက အနည်းငယ် ဟနေတာ တွေ့လိုက်သဖြင့် တွန်းဖွင့် ပြီး အထဲသို့ကြည့်လိုက်သည်။ သူမ နေ့ခင်းက လူးလှိမ့်ကာ စိတ်ဖြေဖျောက်ခဲ့သော ကုတင်ပေါ်ရှိ အိပ်ယာထက်တွင် ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ နေ့ခင်းက သူမ အရည်လေးတွေ သုတ်ခဲ့သည့် ပုဆိုးကိုဝတ်ပြီး ပိုးလိုးပက်လက်အိပ်ပျော်၍ နေသည်။ သူမကိုယ်သူမ သတိမထားမိဘဲ သဲအိဖြူမှာ ဦးမောင်မောင်ဦး၏ ဘေးသို့ ရောက်၍လာသည်။ သူမအကဲခတ်ကြည့် လိုက်တော့ ဦးမောင်မောင်ဦးအိပ်ပျော်နေကြောင်း သိလိုက်ရသည်။ ခါးမှပြေကျနေသော ပုဆိုးကို တုန်ယင်နေသော လက်ဖျားလေးနှင့်ကိုင်၍ အောက်ဖက်သို့ ဆွဲချလိုက်သည်။ ထူထဲကွေးကောက်နက်မှောင်နေသော လမွှေးများကြားမှ မတ် ထောင်နေသော လီးကြီးမှာ တစ်ထွာလောက်ပင်ရှိမလားမသိပေ။ ပြဲလန်နေသော ဒစ်ကြီးကလည်း ပြောင်လက်ကာ တဖိတ် ဖိတ်ဖြစ်နေသည်။ အကြောပြိုင်းပြိုင်းရစ်ပတ်ထားသော လီးလုံးပတ်ကြီးက မဲပြောင်၍နေသည်။ သဲအိဖြူ၏ စိတ်အတွေးထဲမှာ လည်း နေ့ခင်းက ဒီပုဆိုးနဲ့ စောက်ရည်တွေ သုတ်ခဲ့မိတာတွေ ဒီလီးကြီးက မာမီလေးကို လိုးပေးနေတဲ့ လီးကြီးပါလားဆိုတာတွေကို တွေးရင်း စောက်ပတ်ထဲမှ စောက်ရည်တွေ စိမ့်ထွက်လာသည်။ သဲအိဖြူ အသိဉာဏ်တွေ ကင်းမဲ့ကုန်ပြီ။ စိတ်ဆန္ဒတွေ ပြင်းထန်ထကြွလာပြီး မနေနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာတော့ ခါးမှထဘီလေးကို ကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်သို့ တက်လိုက်သည်။ ကုတင်က ငြိမ့်ကနဲတစ်ချက်လှုပ်သွားသဖြင့် ခဏငြိမ်နေလိုက်ပြီးမှ ဦးမောင်မောင်ဦး၏ အပေါ်သို့ခွ၍ တက်လိုက်သည်။ ဖင်ကြီးကို တဖြေးဖြေးဖိချပြီး လီးထိပ်ကြီးနှင့် စောက်ပတ်ဝကို ထိကပ်ကြည့်မိသည်။ “ အင်….” သူမ လည်ချောင်းထဲမှ အသံတစ်သံထွက်သွားသည်။ ဒစ်ကြီးက ဗြစ်ကနဲတိုးဝင်သွားသည်။
လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဦးမောင်မောင်ဦး အိပ်ပျော်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဝင်လာသော လီးဒစ်ပြဲကြီးက စောက်ဖုတ်လေးထဲတွင် ပြည့်ကြပ်ပြွတ်သိပ်နေ သည်။ မကုန်းမကွနှင့် ငုံ့ကြည့်ကာ အသာလေးဖိသွင်းချလိုက်ပြန်သည်။ “ အွန်း…..အွန်း….” သဲအိဖြူ ပါးစပ်အဟောင်းသားလေးဖြင့် ခေါင်းလေးမော့သွားပြီး တစ်ကိုယ်လုံးခါဆင်းသွားသည်။ ဧရာမလီးကြီးကို သဲအိဖြူ၏ စောက်ပတ်အသစ်စက်စက်လေးက တင်းကျပ်စွာညှစ်ပြီး မသိမသာလေး ထလိုက်၊ ထိုင်လိုက်၊ လှုပ်ခါ၍ လိုးပေး နေမိသည်။ ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လိုးပေးနေမိရင်း လီးက အထဲသို့ တဝက်ကျော်ကျော်မှ ဝင်၍လာသည်။ “ ဗြစ်…..ဗြစ်…..ဒုတ်…..ဒုတ်…..” တစ်ခါ တစ်ခါ စောက်ပတ်အုံလေးတစ်ခုလုံး ပြဲကွဲသွားပြီး နာကျင်လာသဖြင့် အသာငြိမ်၍နေလိုက်ရပြန်သည်။ ပြီးမှ ဖြေးဖြေးချင်းလှုပ်ခါ၍ ပြန်လိုးနေမိသည်။ လီးကြီးကို တဆုံးမသွင်းရဲသေး။ စိတ်တွေကလည်း ဗရမ်းပတာယောက်ယက်ခတ်၍ လာသည်။ သဲအိဖြူ၏ ကားအယ်နေသော ဖင်ကြီးက ခပ်သွက်သွက် နိမ့်ချီမြင့်ချီဖြစ်လာသည်။ အရည်ကြည်တို့ကလည်း ထိန်း၍မရလောက်အောင် ရွှဲ၍ထွက်လာကြသည်။ သဲအိဖြူ မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်၍ အားပါးတရကြီး ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် လိုးနေလိုက်မိသည်။ ကာမဆန္ဒတွေက တရိပ်ရိပ်တက်လာပြီး အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ခါနီးဖြစ်လာသည်။ လီးတဝက် လောက်နှင့် အထုတ်အသွင်းလုပ်ကာ လိုးနေရသည်ကိုလည်း အားမရတော့။ တစ်ချီတွင် လီးကြီးကို တဆုံးနီးပါးထုတ်လိုက်ပြီး လီးတဆုံးဝင်အောင် အားနှင့် ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ လီးကြီးက သားအိမ်ကို ဒုတ်ကနဲ ပြေးဆောင့်သဖြင့် စောက်ပတ်ထဲ တွင် ကျင်ခနဲ ခံစားလိုက်ရပြီး သဲအိဖြူ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားသည်။ “ဒုတ်…..အား…..ဟား……” ပြီးချင်လာပြီမို့ စိတ်ကို လွတ်လိုက်ပြီး လီးအဆုံးထိ ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်ဖြင့် အားရပါးရ ဆောင့် ဆောင့်ပြီး လိုးပေး နေမိသည်။ အချက်(၂၀)လောက် အားရပါးရဆောင့်လိုးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ စောက်ပတ်ထဲမှ အီဆိမ့်နေအောင် ကောင်းတဲ့ အရသာကို မှိန်းမောခံစားရင်း သဲအိဖြူ တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ စောက်ခေါင်းထဲမှ အရည်များ ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်။ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းကို လီးအရင်းသို့ အတင်းဖိကပ်ပြီး ပွတ်လှည့်ပေးနေမိသည်။
ကောင်းတာမှ အတော့်ကို ကောင်းလှ အရသာရှိလှသည်။ ခဏအကြာထကြွနေသော သွေးသားတွေက ငြိမ်၍အသွား၊ သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ အရည်များ ဦးမောင်မောင်ဦး၏ ဆီးခုံတစ်ခုလုံးစိုရွှဲနေသည်ကို သတိထားလိုက်မိပြီး ကြောက်အားလန့်အားနှင့် လီးကို ပြွတ်ကနဲ ချွတ်ကာ ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်ကာ ကွင်းလုံးချွတ်ချထားသော ထဘီလေးကို ငုံ့၍ကောက်စွပ်မည်အလုပ် သန်မာသော လက်တစ်ဖက်က သူမကို လှမ်းဆွဲတာ ခံလိုက်ရသည်။ “ အမေ့….” သဲအိဖြူ အလန့်တကြားလှည့်ကြည့်သည်။ “ နေအုံးလေ…..သဲအိ….ဦးမှ မပြီးသေးတာ…..” ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတွင် ထဘီမရှိဘဲ တင်ပါးဖွေးဖွေးပြောင်ပြောင်ကြီးနှင့်ဖြစ်နေသော သူမကို ပြုံးပြုံးကြီးကြည့် နေသော ဦးမောင်မောင်ဦးကို တွေ့လိုက်ရသည်။ “ ဟင်….ဦး….ဦးမောင်…..ဟို…..ဟို…..” “ သဲအိ ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်ကတည်းက ဦးနိုးနေတာပါ…..” “ ရှင်…..” သဲအိဖြူ ငိုင်၍အသွား ဦးမောင်မောင်ဦးက သူမကို ဆွဲ၍ဖက်လိုက်ပြီး ရင်ခွင်ထဲသွင်းကာ အိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက် သည်။ “ ဟို….ဦး…..မလုပ်ပါနဲ့…..မာမီလေး သိသွားရင် မကောင်းဘူး…..မတော်ပါဘူးဦးရယ်….နော်…..နော် ” တကယ့်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ သဲအိဖြူ ကြောက်စိတ်တွေက ငယ်ထိပ်ရောက်နေသည်။ “ တော်ပါတယ် သဲအိရယ်…..ခုပဲ သဲအိက ဦးကို တစ်ချီပြီးအောင် လိုးပေးပြီးပြီမို့လား…..” “ အင်း…..အင်…..ကြောက်တယ်…..ကြောက်တယ်…..” “ ဦးကိုလည်း တစ်ချီလောက်တော့ လုပ်ခွင့်ပေးဦးမှပေါ့…..ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူး…..သဲအိ လိုးလို့ပဲ တစ်ချီပြီး သွားပြီဟာကို……” ဒီလိုဆိုတော့လည်း အဟုတ်သား သဲအိဖြူငြိမ်၍ အသွား ဦးမောင်မောင်ဦးက သူမ၏ နှုတ်ခမ်းပါးပါးလေးကိုဆွဲ၍ စုပ် နမ်းပစ်လိုက်သည်။ နမ်းရင်း လက်တစ်ဖက်က သဲအိဖြူ၏ အဝတ်တွေကိုချွတ်သည်။ သဲအိဖြူကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားတော့မှ ဦးမောင်မောင်ဦးက သူမ၏နှုတ်ခမ်းကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ သဲအိဖြူ မှာ ဦးမောင်မောင်ဦး၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို အသဲတအေးအေးဖြင့် ငေးငိုင်၍ကြည့်နေမိသည်။ နှစ်ယောက်စလုံး ဝတ်လစ်စလစ် ဖြစ်သွားကြပြီး ဦးမောင်မောင်ဦးက သဲအိဖြူအား ကုတင်ပေါ်သို့ ပက်လက်လှန်လှဲချလိုက်သည်။ သဲအိဖြူ ဘာမှမပြော။ မျက်လုံးလေး ကလယ် ကလယ်ဖြင့် တစ်ချက် တစ်ချက် ဦးမောင်မောင်ဦး၏ လီးကြီးကို လှမ်း လှမ်းကြည့်ရင်း လာမည့် အရေးကို တွေး၍ ရင်တွေခုန်နေပြီး အသားလေးတွေပါ တုန်ချင်နေသည်။ “ သဲအိ…..ခြေထောက်တွေ ဦး ပုခုံးပေါ်တင်လိုက်…..” သူ့လီးကြီးက စောစောကထက်ပိုပြီး သိသိသာသာကြီး ထွားကြိုင်းလာတာကို တွေ့ရသည်။
စောစောက သဲအိဖြူ တက်လိုးတော့ အိပ်ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်နေရပြီး သူ့စိတ်တွေကို ချိုးနှိမ်ထားရပုံရသည်။ အခုတော့ သူ့စိတ်ကြိုက်ပေါ်တင် လိုးရတော့မည်ဆိုတော့ စိတ်တွေက အတားအဆီးမရှိ။ လွတ်လပ်သွားပြီး လီးကြီးကလည်း ပိုပိုပြီး ကြီးထွားတောင့်တင်း ကြီးမားလာပုံရသည်။ တကယ်တော့ ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ သဲအိဖြူ ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နှင့် လိုးချင်နေခဲ့တာကြာပြီ ဖြစ်သည်။ သဲအိဖြူမှာလည်း အသက် (၂၀)အရွယ် အလှသွေးကြွယ်နေသည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ အပျိုဖားဖားဖြစ်နေပြီ။ ဆူဖြိုးတင်းရင်းနေသည့် ရင်သားများ၊ တုတ်ခိုင်ဖြောင့်တန်းသော ပေါင်တန်များ၊ ခါးကျင်ကျင်အောက်မှ ဆူဖြိုးကားစွင့်ပြီး အယ်နေသော တင်သားများက မြင်ရသူယောက်ျားတကာကို ရမက်ကြွစေလောက်သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာဆိုလျှင် လည်း ယောက်ျားလေးတွေရှေ့ သဲအိဖြူ လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားပြီဆိုလျှင် ယောက်ျားလေးတွေမှာ သူ့ကိုလှည့်မကြည့်ဘဲ မနေနိုင်ကြပေ။ သဲအိဖြူလို ယောက်ျားတကာရဲ့ ရမက်စိတ်ကို နိုးကြွစေတတ်သော အလှတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက် နှင့် တစ်အိမ်ထဲတွင် အနီးကပ်နေရသူ ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ သဲအိဖြူကို လိုးချင်နေခဲ့သည်မှာ မထူးဆန်းလှပေ။ ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ ခင်မေချစ်၏ လင်ပါသမီးဆိုသည့်အသိနှင့် သဲအိဖြူအပေါ် သမီးအရင်းလို ချစ်တတ်သည့် ခင်မေချစ်၏ မျက်နှာကို ထောက်ထားပြီး လိုးချင်စိတ်ကို ချိုးနှိမ်မေ့ဖျောက်ထားခဲ့သည်။ ယခုတော့ ကိုယ်က မစရပါဘဲနဲ့ သူ့ကိုယ်၌က စလာသည်ဆိုတော့ ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ အနှစ်နှစ် အလလက လိုးချင်နေခဲ့သည့် သဲအိဖြူကို လိုးရတော့မည်ဆိုတော့ ရမက်စိတ်များမှာ ထိန်းလို့မရလောက်အောင်ပင် ထကြွနေသည်။ ထကြွနေသည့် စိတ်အဟုန်နှင့် စောစောက သဲအိဖြူ တက် လိုးထားသည့် အရှိန်ကြောင့် လီးကြီးမှာ အကြောပြိုင်းပြိုင်းထကာ မတ်တောင်နေပြီး သာမာန်ထက် ပိုပြီး တုတ်ခိုင်ကြီးမားလာရခြင်းဖြစ်သည်။ သဲအိဖြူက ပြောသည့်အတိုင်း ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်တင်လိုက်တော့ စောက်ပတ်အသစ်စက်စက်လေး နှင့် ဧရာမလီးကြီးတို့မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့မိကြသည်။ ကုတင်ကို ကန့်လန့်ဖြတ်လှဲ၍ ပက်လက်လေးဖြစ်နေသော သဲအိဖြူ ၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက ကုတင်အောက်မှ မတ်တပ်ရပ်၍နေသော ဦးမောင်မောင်ဦး၏ ပုခုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ရှိနေ သည်။
လီးကိုကိုင်ပြီး စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် လီးထိပ်ကြီးနှင့် အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲပေးသည်။ “ အဟင့်…..ဟင့်…..ဦး…..ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ….လို့ ” သဲအိဖြူ ခရာတာတာလေးဖြစ်လာသည်။ အရည်ကြည်တွေကလည်း စိုရွှဲနေပြီ။ “ လိုးတော့မယ်နော်…..” “ အင်း…..အင်း…..” သဲအိဖြူ ကဗျာကယာပြောကာ ဝင်လာမည့်လီးကြီးကို စောင့်ကြိုရင်း မျက်လုံးတွေကို စုံမှိတ်ပစ်လိုက်သည်။ “ ပြွတ်…..” “ အား…..အမေ့….”အား…..အား…..ကြပ်လိုက်တာ…..အဟင်း….စောစောကတော့ ဝင်ပြီးတော့…..ဟင်း…..အ…..အ…..ဦးဟာကြီး က ပိုကြီးလာတယ်…..ဟင်း…..အင်း…..အား…..သေပါပြီ….အား…အီး…..တော်ပြီ….တော်ပြီ….အား….အား…..” ကုတင်စောင်းပုံစံက လီးအဝင်ကြမ်းသည်။ နက်သည်။ အနှစ်နှစ် အလလက လိုးချင်နေခဲ့သည့် စိတ်ကိုလွှတ်ပေး ထားသော ဦးမောင်မောင်ဦး၏ လီးကြီးက အဆမတန်ထွားကြိုင်း၍နေသည်။ သဲအိဖြူ မျက်ရည်များ ကျဆင်းလာသည်။ “ အာ….အ….နာတယ်….နာတယ်…..” “ အစမို့ပါ…..သဲအိရာ….စောစောကပဲ ဝင်ပြီးပြီဟာ….” “ အားဟား…..စောစောက ဒီလောက်မကြီးဘူး…..ခုဟာက နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး…..” အား….ပါး….ပါး….အီး…..ဟီး…..” အရှိန်တက်နေသော ဦးမောင်မောင်ဦးက နောက်ဆုတ်ရန် မစဉ်းစားတော့ဘဲ ကျန်သောလီးကိုဖိချ၍ သွင်းယူလိုက် သည်။ သဲအိဖြူ ပါးစပ်လေး ဟ သွားသည်။ လီးကြီးထိပ်က လည်ချောင်းဝထိ ရောက်လာသလား ထင်လိုက်ရသည်။ လီးကြီး တဆုံးဝင်သွားပြန်ပြီ။ စောစောက သူမ တက်လိုးသည့်အခါက လီးအဆုံးထိ သွင်းပြီးလိုးခဲ့တာမှန်ပေမယ့် အဲ့တုန်းက လီးကြီးက ဒီလောက် မကြီးမားသေးပေ။ ယခုစောစောကထက် အဆမတန်ကြီးမားလာသည့်အတွက် ဒီတစ်ကြိမ် အဆုံးထိ အသွင်းခံလိုက်ရခြင်းက ပို၍အခံရခက်လှပေသည်။ သဲအိဖြူ တဖြေးဖြေး ငြိမ်သက်သွားသည်။ ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးကြီးတဆုံးဝင်သွားသည်နှင့် လီးကြီးကို အထုတ်အသွင်းမလုပ်သေးဘဲ ငြိမ်ထားပြီး စောက်ပတ်အတွင်း သားလေးများ၏ တရွရွလှုပ်ရှားကာ ပွတ်သပ်ကလူကျီစယ်သည်ကို ငြိမ်၍ခံစားရင်း ဦးမောင်မောင်ဦးက သဲအိဖြူ၏ နို့အုံလုံး လုံးကျစ်ကျစ်လေးများကို ချေပေးနေသည်။ “ အင်း….ဟင်း…..ဟင်း…..ကျွတ်…..ကျွတ်…..ကျွတ်…..” သဲအိဖြူ ဖင်ကြီးကို လူးလွန့်ပြီး လီးကြီးကို စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးနှင့်ညှပ်ကာ ဖျစ်ညှစ်၍ ခါးလေးကော့တက် လာသည်။
လိုးပြီ….ဦးမောင်မောင်ဦး လျှောကနဲ လီးကို တဝက်လောက်ဆွဲထုတ်ပြီး လိုးသည်။အား….အင်း…အင်း….အား….အင်း….” ဆောင့်လိုက်သော အရသာက ခံလို့ကောင်းလှသည်။အား…..အီး….ထွက်…..ထွက်ကုန်ပြီ…..အား…..ရှီး….” သဲအိဖြူ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်ပြီး ထပ်ခါ ထပ်ခါ ကော့ကော့ပင့်ဆောင့်ပစ်လိုက်ကာ အီဆိမ့်ချိုနေသော ကာမအရသာကို အပြည့်အဝကြီး ခံစားလိုက်ရသည်။ လီးကြီးကို ခဏကြာအောင် ဖြေးဖြေးချင်း အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးနေ ပြီးမှ လျှောကနဲ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ “ သဲအိ….ကုတင်ပေါ်ကဆင်းပြီး ကုတင်စောင်းမှာ လေးဖက်ထောက်လိုက်…..” ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ သူလိုးချင်နေခဲ့တာကြာပြီဖြစ်သည့် သဲအိဖြူ၏ ဆူဖြိုးကားစွင့်ပြီး အယ်ချင်တိုင်းအယ်နေသော ဖင်ကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး လိုးချင်လာသည်မို့ ပုံစံပြောင်းကာ လေးဘက်ကုန်းခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သဲအိဖြူ နွမ်းနယ်စွာဖြင့် ကုတင်ပေါ်မှဆင်းပြီး ဦးမောင်မောင်ဦးပြောသည့်အတိုင်း လုပ်ပေးလိုက်သည်။ စိတ်ထဲမှ ခုပဲတစ်ချီထပ်ပြီးသွားတယ် အခုပဲ ဆက်လုပ်ဦးမယ်ဆိုပြီး တွေးမိရာမှ အင်း….သူက ပြီးမှမပြီးသေးတာ ပြီးချင်နေမှာပဲ ဟူ၍ အဆုံးသတ်တွေးလိုက်ကာ ဦးမောင်မောင်ဦးရှိရာသို့ သမင်လည်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ “ နောက်ပြန်ကြီး ဝင်ပါ့မလား ဦးရဲ့…..” “ သဲအိ ခါးကိုခွက်ထား….ဟုတ်ပြီ…..တင်ပါးလေးဖြဲပြီး ကားထား….” ဆူဖြိုးကားအယ်နေသော ဖင်ကြီး၏နောက်မှ ပြူးထွက်လာသော စောက်ပတ်လေးက တဖိတ်ဖိတ်တောက်၍ လှချင် တိုင်းလှ၍နေသည်။ ချစ်စရာခါးကျင်ကျင်လေးကိုကိုင်ပြီး လီးကြီးကို တေ့ကာသွင်းလိုက်သည်။ “ ပြွတ်….ပြွတ်….ဗြစ်….ဗြစ်…ပြွတ်…ဖွတ်….ဘွတ်…ဘွတ်….” “ အင်း….အင်း…..အသံတွေကလည်း မြည်လိုက်တာ…..” ဟုတ်သည်။ သဲအိဖြူ ပြီးထားသော အရည်တွေက စောက်ပတ်ထဲတွင် ပိုလျှံနေသည်။ အီး….ကောင်းလိုက်တာနော်….ဟင်း…..ဟင်း….ကျွတ်….ကျွတ်…..” ဖင်ကြီးကို လမွှေးအုံကြီးက ဖိကပ်ပွတ်တိုက်ရင်း ဂွေးစိကြီးကပါ အောက်မှလွှဲရိုက်နေသည်မို့ သဲအိဖြူ မခံစားဖူးသော အရသာတွေ ဆူဝေ၍နေသည်။အိ….အား….ဖြေး….ဖြေး….လုပ်….ဆောင့်…..အား….ကျွတ်….ကျွတ်…..” သဲအိဖြူ ဖင်ကြီးတရမ်းရမ်းနှင့် ကောင်းချင်တိုင်း ကောင်းနေသည်။ အီး….အီး….ကောင်းလာပြီ…..လုပ်……လုပ်…..ဆောင့်….အ….အား…..” ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ အနှစ်နှစ် အလလက အရိပ်တကြည့်ကြည့်လိုးချင်နေခဲ့သည့် သဲအိဖြူကို စိတ်ကြိုက်လိုးနေရပြီး ကြီးမားကားအယ်နေသော ဖင်ကြီးမှာလည်း ဆောင့်လိုက်တိုင်း တုန်ခါသွားသည်ကို ကြည့်ရင်း ရင်ထဲမှာ ရမက်မီးတွေ ပြင်းထန်စွာလောင်ကျွမ်းလာသည်နှင့်အတူ သဲအိဖြူ၏ ရမက်စကားသံတွေကို ကြားရတော့ ခါးကျင်ကျင်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲကိုင်ပြီး အားရပါးရ မညှာမတာ ဆောင့် ဆောင့်ပြီး လိုးနေသည်။
သဲအိဖြူ၏ ဖင်ကြီးတွေမှာလည်း ဆောင့်လိုက်သည့်အခါ တိုင်း တုန်ခါသွားသည်မှာ ရမက်စိတ်ကို ပိုမိုထကြွစရာဖြစ်နေသည်။အား….ဟား….ထွက်ပြီ…..ထွက်ကုန်ပြီ ဦးရယ်…..အား….ကျွတ်…..ကျွတ်…..” သဲအိဖြူမှာ ဖင်ကြီးကို နောက်ပြန် ပြန်၍ဆောင့်ရင်း ဖင်ကြီးတစ်ခုလုံး ခါရမ်းသွားကာ စောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရည် များ ဒလဟော ထွက်ကျကုန်သည်။ ဦးမောင်မောင်ဦး၏ လီးကြီးမှာလည်း သံချောင်းကြီးပမာ ပို၍ပို၍ တင်းပြောင်မာကျော လာသည်။ “ ပြွတ်….စွပ်….ပလွတ်….ပလွတ်….ပြွတ်…ဒုတ်….ဗြစ်…ပြွတ်….ဗြစ်…..ဗြစ်….အား….အား….ဟင်း….သဲ….သဲအိ ရယ်…..အင်း….” သုံးလေးချက်လောက် အားရပါးရ ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုးလိုက်ပြီးနောက် သဲအိဖြူ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ သုတ်ရည်များ ပန်းထည့်လိုက်သည်။ “ အား….အား….အ….ကောင်းလိုက်တာ…..သဲအိရယ်…..” ဦးမောင်မောင်ဦးက လီးကြီးကို မချွတ်ဘဲ သဲအိဖြူ၏ ကျောပြင်လေးကို ကုန်းနမ်းရင်း မှောက်ထား၍ အောက်သို့တွဲ လောင်းကျနေသော နို့လေးများကို အောက်မှလျှိုပြီး နှိုက်ကာ သုံးလေးချက်မျှထပ်ပြီး ဆောင့်ချလိုက်ရာ လုံးကျစ်ကားအယ် နေသော ဖင်သားကြီးမှာ တုန်ကနဲ တုန်ကနဲ ခါရမ်းသွားပြန်သည်။ “ ဘယ်နဲ့လဲ….ဦး လိုးတာ ကောင်းရဲ့လား…..” “ အို….ဘာတွေမေးနေတာလဲ မသိဘူး…..” “ ဒီပုံစံကို ဦး သိပ်ကြိုက်တာ….ဒီအတိုင်းပဲ လီးမထုတ်တော့ဘဲ ဆက်လိုးမယ်နော်…..” “ ဟာ…..ဆက်လုပ်ဦးမယ်…..အဟင့်….” သဲအိဖြူ ငိုချင်စိတ်ပေါက်သွားသည်။ ဒါပေမယ့် ဦးမောင်မောင်ဦးက နို့လေးနှစ်လုံးကို အောက်သို့နှိုက်၍ ဆွဲလိုက်ပြီး လီးကြီးကို ဖိဆောင့်ချလိုက်ရာ သဲအိဖြူ ခမျာ “ ဟင်း ” ကနဲဖြစ်ပြီး မျက်တောင်လေးများ စင်းကျသွားသည်။ ဦးမောင်မောင်ဦးက လီးကြီးကို မထုတ်သေးဘဲ တဆုံးသွင်းထားရင်း သဲအိဖြူ၏ ဖင်ကြီးနဲ့ ဆီးခုံအရင်းဖိကပ်ထားသည်။ လက်နှစ်ဖက်က သဲအိဖြူ၏ နို့နှစ်လုံးကို ပွတ်ချေဆုတ်နယ်ပေးနေသည်။ ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ သဲအိဖြူ၏ နောက်မှ ဖင်ကြီးကို စကောဝိုင်း ဝိုင်း၍ လှုပ်ခါပေးရင်း လီးကြီးကို စောက်ပတ်ထဲတွင် လှည့်ပတ်၍ မွေပေးနေသည်။ ကြီးမားတုတ်ခိုင်၍ ပြည့်သိပ် ကြပ်ညှပ်နေသော စောက်ခေါင်းလေးထဲတွင် ဧရာမလီးကြီးက လှည့်ပတ်ထိုးမွေနေသည့်အတွက် စောက်ခေါင်းအတွင်းသား နံရံများကို ထိပွတ်လိုက်သည့် ထူးကဲသည့် အရသာကို သဲအိဖြူ မှိန်းမောခံစားရင်း ငြိမ်သက်သွားသည့် ရမက်စိတ်များမှာ ပြန်လည် ထကြွလာသည်။ လီးကြီးက စောက်ခေါင်းနံရံများကို နေရာအနံ့ထိုးမွေ ပွတ်တိုက်နေသည့်အတွက် စောက်ခေါင်းထဲ မှ ယားတက်လာကာ စောက်ရည်များ ထွက်ကျလာပြန်သည်။ သဲအိဖြူမှာ ရမက်စိတ်များ ထကြွလာပြီး စောက်ခေါင်းထဲမှ လည်း မနေနိုင်လောက်အောင် တရွရွယားလာသည့်အတွက် အားမလိုအားမရဖြစ်ကာ ဖင်ကြီးများကို လှုပ်ခါပြီး နောက်ပြန် ပြန်၍ တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်သည်။
ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ သဲအိဖြူ တစ်ယောက် မနေနိုင်လောက်အောင် စိတ်တွေထကြွလာပြီကို သိရှိလိုက်ပြီး သူ၏ လီးကြီးကို စောက်ပတ်ထဲမှ တဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ဖြေးဖြေးချင်း လိုးသွင်းပေးသည်။ လီးတဆုံး သွင်းလိုက်ပြီးနောက် ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်လိုးသွင်းသည်။ သဲအိဖြူမှာ စိတ်တွေထကြွပြီး ရွထနေသည့်အထဲ ဦးမောင်မောင်ဦးက ဖြေးဖြေးချင်း အရသာခံကာ လိုးပေးနေသည့်အတွက် အားမလိုအားမရ စိတ်တွေ ပိုပြီးဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ဖင်ကြီးတွေကို နောက်ကို ပစ်ပစ်ပြီး ပြန်၍ ဆောင့်ပေးသည်။ လီးဒစ်ထိပ်ဖျားထိ စောက်ပတ်ထဲမှ ထွက်သွားပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်ဝင်လာသည့် လီးကြီးကို အားမရစွာဖြင့် လီးကြီး စောက်ပတ်ထဲမဝင်လာခင်မှာပဲ ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ ပစ်ပစ်ပြီး ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ ကိုယ်က လိုးဆောင့်စရာမလိုပဲ မတ်တပ်ရပ်နေရုံဖြင့်ပင် ဖင်ကြီးက နောက်သို့ ပစ်ပစ်ဆောင့်ပြီး လီးကြီးကို စောက်ပတ်ထဲ သွင်းယူလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက် လုပ်နေသည့်အတွက် သဲအိဖြူ စိတ် တွေ အဆမတန်ထကြွပြီး ရမက်ထန်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်သည်။ ဦးမောင်မောင်လည်း သဲအိဖြူ စိတ်ကြိုက်ဆောင့်ပါစေ ဆိုသည့် သဘောဖြင့် ခါးကျင်ကျင်လေးကို အလိုက်သင့်ကိုင်ပြီး ဒီအတိုင်း မတ်တပ်ရပ်ကာ သဲအိဖြူက ဖင်ကြီး နောက်ပစ်ပစ် ဆောင့်ပြီး အလိုးခံနေတာကို အားရကျေနပ်စွာ ကြည့်နေမိသည်။ ဖင်ကြီးကို အားဖြင့်နောက်ပြန်ဆောင့်လိုက်၍ လီးတဆုံးဝင် သွားပြီး ဆီးခုံအရင်းထိဖိကပ်သွားတိုင်း ဖင်သားကြီးများ တုန် တုန်သွားသည်ကိုလည်း အရသာခံကာ ကြည့်နေမိသည်။ အား….အား…..ကောင်းလိုက်တာ ဦးရယ်….အား…..အင့်….အင့်….” သဲအိဖြူမှာ ရှေ့သို့ထောက်ထားသည့် လက်နှင့် အားယူရင်း အောက်နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ကာ အံကိုကြိတ်၍ ဖင်ကြီးကို နောက်ပစ်ပြီး အားရပါးရ ဆောင့်နေသည်။ “ အား….ဆောင့်…..ဆောင့်…..သဲအိ ကြိုက်သလို ဆောင့်…..အား….အား… အား….ကောင်းလိုက်တာ ဦးရယ်….သဲအိ မနေနိုင်တော့ဘူး….အား….အင်း…..အင့်….အင့်….သဲအိဖြူမှာ ဖင်ကြီးတရမ်းရမ်းနှင့် ဆောင့်ရင်း စောက်ပတ်အတွင်းသားများဖြင့် ဦးမောင်မောင်ဦး၏ လီးကြီးကို တစ်ချက် တစ်ချက် ညှစ် ညှစ်ပေးသည်။
အစက ဘာမှမလှုပ်ရှားပဲ သဲအိဖြူ နောက်ပြန်ဆောင့်ပေးတာကို မတ်တပ်ရပ်၍ ငြိမ် ခံနေသော ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ သဲအိဖြူ၏ စောက်ပတ်အတွင်းသားများဖြင့် ညှစ် ညှစ်ပေးလိုက်သည့်အခါတွင် လီးကြီးတစ်ခု လုံး အီဆိမ့်နေအောင် ကောင်းသွားပြီး ရမက်စောတွေ ပြင်းထန်လာရသည်။ “ အား….သဲ…သဲအိရယ်….အား….ကောင်း…ကောင်းတယ်….အဲ့လို…ညှစ်…ညှစ်ပေး….အား….အင်း….” “ အား…ဟား….အင်း….အင်း….” သဲအိဖြူမှာ ဦးမောင်မောင်ဦးက ကောင်းတယ်…ညှစ်ပေးဆို၍ လီးကြီး သူ့စောက်ပတ်ထဲဝင်အောင် နောက်ပြန်ပစ် ဆောင့်ပေးသည့်အခါတိုင်း စောက်ပတ်အတွင်းသားများကို အားထည့်၍ လီးကြီးဝင်လာတိုင်း ညှစ် ညှစ်ပေးသည်။ ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ အပေးကောင်းသည့် သဲအိဖြူကြောင့် ထူးကဲသည့်ကာမအရသာများကို ခံစားရင်း စိတ်ကို မထိန်းနိုင် တော့။ စောစောက အားစိုက်မလိုးသေးဘဲ ငြိမ်နေပေမယ့် ယခုအခါတွင် သဲအိဖြူ၏ ရမ်းခါနေသောဖင်ကြီးများကို လက်နှစ် ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်၍ အားထည့်ကာ အားရပါးရ ခပ်ပြင်းပြင်း တစ်ချက် ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။ စောက်ခေါင်းအတွင်းသားများ အားနှင့် စုပ်ညှစ်ထားသော စောက်ပတ်အတွင်းသို့ တဆုံးဝင်သွားသော လီးကြီးကို ဆွဲမထုတ်သေးဘဲ ဒီအတိုင်း သွင်းထား လျက်နှင့် သဲအိဖြူ၏ စောက်ပတ်ညှစ်အားကို အရသာခံနေမိသည်။ သဲအိဖြူကလည်း တဆုံးဝင်နေသော လီးကြီးကို စောက် ခေါင်းအတွင်းအားနဲ့ ညှစ်ထားသည်။ ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ စောက်ပတ်ညှစ်အားရဲ့ ဒဏ်ကို ကြာကြာမခံနိုင်တော့ စောက်ပတ်ထဲမှ ဆွဲစုပ်ပြီး ညှစ်ထားသည့် အတွက် လီးကြီးတစ်ခုလုံး အကြောတွေ တောင့်တင်းလာသည်။ သဲအိဖြူ၏ စောက်ပတ်ထဲမှ လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက် သည်။ အတွင်းမှ စုပ်ညှစ်အားကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့် လီးကြီးမှာ တော်တော်နှင့် ဆွဲထုတ်မရဘဲ ကြပ်နေသည်။ လီးကြီးကို ဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ လီးဒစ်ထိပ်ဖျားထိ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးနောက် ဆတ်ခနဲ အားနှင့် ဆောင့်လိုးသွင်း လိုက်သည်။ လီးကြီးက ညှစ်ထားသော စောက်ပတ်အတွင်းသားများကို လျှောတိုက်ပွတ်ဆွဲဝင်သွားသည်။ လီးတဆုံးဝင်သွား ပြီး ချက်ချင်းပင် ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ သဲအိဖြူ၏ စောက်ပတ်အတွင်းသားလေးများမှာ လီးကြီးနဲ့ ကပ်ညှိပြီး အပြင်သို့ အုံ ကြွ၍ ပါလာကြသည်။ လီးဒစ်ထိပ်ဖျားထိ ရောက်အောင်ဆွဲထုတ်ပြီး အားနှင့် ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်လိုး သွင်းလိုက်ပြန်သည်။
အား….အ….ဖြေးဖြေး….ဆောင့်…ဆောင့်ပါ ဦးရယ်…..” “ အင့်…အင့်….ကောင်း…ကောင်းလားဟင်….သဲအိ…..ဦး လိုးတာကောင်းလား ဟင်….” “ အား….ကောင်း…ကောင်းတယ်….ဦးရယ်….” သဲအိဖြူ၏ ဖင်ကြီးကို စုံကိုင်ပြီး အားရပါးရ မညှာတမ်း ခပ်ပြင်းပြင်း လေး ငါးချက်လောက် ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ ကားအယ်နေသော ဖင်ကြီးတစ်ခုလုံး တုန်ခါသွားသည်။ နောက်ဆုံး ဆောင့်လိုးလိုက်ပြီးချိန်မှာတော့ လီးကြီးကို ပြွတ်ကနဲ နေ အောင် စောက်ပတ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ သဲအိဖြူ ရင်ထဲ ဟာကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ “ အား…..ကျွတ်….ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ ဦးရယ်….ဒီမှာ ပြီးတော့မယ့်ဟာ….” “ သဲအိ….ဦးတို့ ပုံစံပြောင်းရအောင်ကွာ…..သဲအိ ဦးကို အပေါ်က တက်လုပ်ပေး….” “ အင်း…အင်း….” လီးကြီးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီးနောက် ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ မတ်တောင်နေသည့် လီးကြီးတရမ်းရမ်းဖြင့် ကုတင်ပေါ် တက်ကာ ပက်လက်လှန်အိပ်ပေးလိုက်သည်။ သဲအိဖြူမှာ လီးကျွတ်သွားပြီးနောက် စောက်ရည်တွေက ပေါင်တံတလျှောက် ယိုစီးကျလာသည့်အတွက် သူမ ထဘီလေးဖြင့် စောက်ပတ်နှင့် ပေါင်တံများမှာ ပေကျံနေသည့် စောက်ရည်များကို သုတ်ပစ် လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်ကာ ဦးမောင်မောင်ဦး အပေါ်သို့ ခွတက်လိုက်သည်။ ဦးမောင်မောင်ဦး၏ လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး စောက်ပတ်ဝတွင် တေ့၍ ဖြေးဖြေးချင်း ဖင်ကြီးကို ဖိချ၍ သွင်းလိုက်ကာ လီးတဆုံးဝင်ခါနီး အနည်းငယ် အလိုတွင် ဆောင့်ချ၍ သွင်းလိုက်သည်။ အခန်းထဲ စရောက်ခါစ တက်လိုးတုန်းက အိပ်ပျော်နေသော ဦးမောင်မောင်ဦး နိုးသွားမည်ဆိုးသည့်အတွက် စိတ်ကို ထိန်းပြီး ငြိမ်သက်စွာ လိုးပေးခဲ့ရပေမယ့် အခုပေါ်ပေါ်တင်တင် တက်လိုးရသည့်အခါတွင်တော့ တက်ကြွနေသည့် ကာမစိတ် ဆန္ဒအတိုင်း စိတ်ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး အားရပါးရ ဆောင့် ဆောင့်လိုးတော့သည်။ လိုးသည့်အခါတွင်လည်း စောက်ပတ် အတွင်းသားများဖြင့် လီးကြီးကို စုပ်ညှစ်ပြီး ဆောင့် ဆောင့်လိုးပေးသည့်အတွက် ဦးမောင်မောင်ဦးအဖို့ ထူးကဲသည့် ကာမအရသာကို မှိန်းမောခံစားရင်း သဲအိဖြူ ဆောင့်လိုးတာ ခံနေမိသည်။အား….ဦးရယ်….သဲအိ….မရတော့ဘူး….မနေနိုင်တော့ဘူး….အင်း….ဟင်း….” ကားအယ်နေသော ဖင်ကြီး၏ဝိတ်နှင့် အားထည့်ကာ စောက်ပတ်အဝနှင့် ဆီးခုံအရင်းဖိကပ်သည်အထိ အချက်ပေါင်းများစွာ စိတ်ရှိတိုင်း အားရပါးရ ဆောင့်လိုးပေးရင်း နှစ်ယောက်စလုံးမှာ ကာမအတွေ့ထူးတွေ ခံစားရင်း ကာမပန်းတိုင်ကို စိတ်တူကိုယ်တူ ပြိုင်တူချီတက်နေကြသည်။ တိတ်ဆိတ်နေသည့် အိမ်ကြီးထဲတွင် ပြွတ်…ဗြစ်…ပြွတ်…ပလွတ် အသံများနှင့် ကုတင်လုပ်သံများ ညံနေသည်။
ခင်မေချစ် တစ်ယောက် အိပ်မောကျနေရာမှ နားထဲတွင် အသံများကြားယောင်လာသည့်အတွက် အိပ်မက် မက်သလိုလို တကယ်လိုလို ဝေခွဲမရနိုင်ဘဲ အိပ်ချင်မူးတူးဖြင့် မျက်လုံးများ ဖွင့်ကာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အာရုံစိုက်၍ နားထောင်နေမိသည်။ တိတ်ဆိတ်နေသည့် အိမ်ကြီးထဲတွင် အသံတွေက ပီပီသသကြားနေရသည်။ ခင်မေချစ်မှာ အသံလာရာကို သိချင်စိတ်ဖြင့် စူးစမ်းလိုသည့်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး တဆက်တည်းမှာပင် အပေ့ါသွားချင်သည့် စိတ်များလည်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ခင်မေချစ် အခန်းမှာ ရေအိမ်နှင့် နီးသည့်အတွက် အိပ်ခန်းတံခါးလက်ကိုင်ဘုကို အသံမထွက်အောင် အသာအယာ လှည့် လိုက်ပြီး အခန်းထဲမှ ထွက်ကာ ရေအိမ်ထဲသို့ ဝင်ပြီး အပေါ့သွားလိုက်သည်။ အပေါ့သွားလိုက်ရသည့်အတွက် စိတ်ပေါ့ပါး သွားသလို ရှိလာပြီး အသံလာရာကို စူးစမ်းချင်သော စိတ်များ တဖွားဖွားပေါ်ထွက်လာသည်။ ခင်မေချစ်မှာ ခြေသံလုံအောင် လျှောက်လှမ်းရင်း သဲအိဖြူ အခန်းရှေ့သို့ရောက်လာသည်။ အခန်းတံခါးပိတ်ထားသည့်အတွက် သဲအိဖြူ အိပ်မောကျနေပြီ ဟုသာ ထင်နေသည်။ ဒါဆို ကိုမောင်မောင်ဦး ဒီအချိန်ကြီး ဘယ်သူနဲ့….ဆိုတာကို သိချင်စိတ် ပြင်းပြလာသည်။ အခန်းကပ် လျက်ဖြစ်သည့် ကိုမောင်မောင်ဦး အခန်းရှေ့သို့အရောက်တွင် တံခါးကို မပိတ်ထားဘဲ စေ့ထားသည့်အတွက် တံခါးကို အသာဟကာ အခန်းထဲသို့ ကြည့်လိုက်သည်။ သဲအိဖြူကလည်း ဦးမောင်မောင်ဦး အခန်းထဲဝင်သွားပြီး တံခါးကို ပြန်မပိတ်ခဲ့မိပေ။ ခင်မေချစ် တစ်ယောက် မျက်လုံးတွေ ပြာဝေသွားသည်။ ရင်ထဲမှာ ဘလောင် ဆူသွားသည်။ သမီးအရင်းတစ် ယောက်လို ချစ်ရသည့် သမီးနှင့် မိမိယူမယ့် ယောက်ျားလောင်းတို့ ဖြစ်ပျက်နေလိုက် ကြတာ လောကကြီး တစ်ခုလုံး ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဟုပင် တွေးလိုက်မိသည်။ မြင်ရသည့်မြင်ကွင်းကြောင့် ရင်ထဲတွင် စို့နင့်စွာ ခံစား လိုက်ရသည်။ ကိုမောင်ရယ်….လုပ်ရက်လိုက်လေခြင်း…..မေချစ်ကို သစ္စာဖောက်ရက်လိုက်လေခြင်း ဟုတွေးရင်း မျက်ဝန်း အိမ်တွင် မျက်ရည်တွေ စို့လာပြီး ပါးပြင်ပေါ်သို့ တဖြေးဖြေးစီးကျလာသည်။
မြင်ကွင်းကို ဆက်မကြည့်သင့်တော့ဟု အသိစိတ် က နိုးဆော်သည့် အတွက် နောက်ပြန်ဆုတ်ကာ မိမိအခန်းဆီသို့ ခြေဦးလှည့်ရန် ပြင်လိုက်သည်။ သို့သော် ခင်မေချစ် ခြေလှမ်းတွေ နောက်ပြန်လှည့်မရတော့ မြင်ရသည့်မြင်ကွင်းက နောက်ပြန်မလှည့်နိုင်လောက်အောင် ဖမ်းစားထားချေပြီ။ မြင်ကွင်းကိုလည်း ကြည့်ပါဦး ဦးမောင်မောင်ဦးက ပက်လက်လှန်အိပ်နေပြီး သဲအိဖြူက အပေါ်မှ တက်ကာ အားရပါးရ ဆောင့် ဆောင့်လိုးပေးနေသည်။ ညဦးပိုင်းက ကိုမောင့် ဆန္ဒကို မဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ဘဲ မူနေလိုက်မိသည့်အတွက် ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် နောင်တရနေသည်။ သူမသာ ကိုမောင့်ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပြီး ကိုမောင်နဲံ့သာ တစ်ညလုံးနေပေးလိုက်မည်ဆို လျှင် ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဟု ခင်မေချစ် တွေးနေမိသည်။ အခုတော့ သူ့နေရာကို သူ့လင်ပါသမီး သဲအိဖြူက ဝင်ယူသွားချေပြီ။ တွေးရင်း တွေးရင်း နောင်တစိတ်နဲ့အတူ ရင်ထဲမှာ တနုံ့နုံ့စို့နင့်ခံစားရတာနဲ့အမျှ မျက်စိရှေ့ အခန်းထဲမှ မြင်ကွင်းကြောင့် ရမက်စိတ်တွေက ထကြွလာသည်။ ခင်မေချစ် တစ်ယောက် စေ့ထားသော တံခါးကို အနည်းငယ်ဟကာ ချောင်းကြည့်ရင်း နေရာတွင်ရပ်ကာ အခန်းထဲသို့ စူးစိုက်ကြည့်ရင်း အာခေါင်တွေ ခြောက်လာသည်။ အခန်းထဲမှ ဦးမောင်မောင်ဦးနှင့် သဲအိဖြူမှာတော့…. “ အင်း….အား….ကောင်းလိုက်တာ သဲအိရယ်….ဆောင့်….ဆောင့်…..သဲအိ ဆောင့်…..အား….အင့်….အင့်…. အား….” ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ သဲအိဖြူ၏ စောက်ပတ်ညှစ်အားနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် စိတ်ကို မထိန်းနိုင်တော့ ဘဲ ပြီးချင်လာကာ အောက်မှ ပြန်၍ အားပါပါဖြင့် ကော့ကော့ပြီး ဆောင့်လိုးပေးသည်။အား….ကောင်းလိုက်တာ ဦးရယ်….ဆောင့်….အင်း….အင့်…ဆောင့်….ဆောင့်….သဲအိ ပြီးတော့မယ်….အား….. ဟား…အား….ဆောင့်….အား….ဦးလည်း ပြီးတော့မယ်….အား….အား….သဲအိလည်း ဆောင့်ပေး….” နှစ်ယောက်စလုံးကာမပန်းတိုင် အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ခါနီးလာကြသည်။
သဲအိဖြူက ကားအယ်နေသော ဖင်ကြီး ကို အားထည့်၍ ဖင်ကြီးဝိတ်နှင့် အားရပါးရ ဆောင့် ဆောင့်လိုးပေးနေသလို ဦးမောင်မောင်ဦးကလည်း သဲအိဖြူ၏ အထက် အောက်လှုပ်ရှားကာ ရမ်းခါနေသောဖင်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံဆွဲကိုင်ကာ အောက်မှ အားရပါးရ ပြင်းထန်စွာ ကော့ကော့ ဆောင့်ပေးနေသည်။ ဦးမောင်မောင်ဦး၏ အောက်မှ ပင့်ဆောင့်ပေးချက်များမှာလည်း အားပါ ပြင်းထန်လှသည်။ နှစ်ယောက် စလုံး အပြန်အလှန် စိတ်တူကိုယ်တူ အားရပါးရဆောင့်လိုးနေကြရင်း ကာမပန်းတိုင် ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိလာကြသည်။ ဦးမောင်မောင်ဦး၏ လီးကြီးတစ်ချောင်းလုံး ကျင်တက်လာကာ ဆွဲကိုင်ထားသော သဲအိဖြူ၏ ဖင်ကြီးတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းအောက်သို့ ဖိဆွဲချရင်း ကိုယ်တိုင်လည်း အောက်မှ အားပါပါဖြင့် ခပ်ပြင်းပြင်း လေးငါးချက်လောက် ကော့ကော့ ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်သည်။ ဦးမောင်မောင်ဦး၏ ပြင်းထန်းထိမိသော ကော့တင်ဆောင့်ချက်များနှင့်အတူ သဲအိဖြူမှာလည်း ပြီးကာနီးအဆုံးသတ်အနေဖြင့် ဦးမောင်မောင်ဦး၏ လီးကြီးကို တစ်ကိုယ်လုံးအတွင်းရှိ အားများကို စောက်ပတ်ထဲတွင် စုထည့်ပြီး စောက်ပတ်အတွင်းသားများဖြင့် စုပ်ဆွဲဖျစ်ညှစ်ရင်း ခါးအားသုံး၍ အားရပါးရ လေးငါးချက်လောက် ပြင်းထန်းစွာ ဆောင့်လိုးချလိုက်သည်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အားရပါးရ ပြင်းထန်စွာ လေးငါးချက်လောက် အပြန်အလှန် ဆောင့်လိုးပြီးချိန်တွင်တော့ ကာမပန်းတိုင်ရဲ့ ခရီးဆုံးကို အတူတူရောက်ရှိသွားကြသည်။ “ အား…ဆောင့်….ဆောင့်….ဦး….အား…ဟား…..ထွက်…ထွက်ကုန်ပြီ….ဦးရဲ့….ဆောင့်….ဆောင့်….အား… အင်း…ဟင်း….အ….အား….သဲ….သဲအိ…ရယ်…..သဲအိ ကို….ဦး သိပ်ချစ်….ချစ်…အား ….အား…ပြီး….ပြီး….ဗြစ် ပြွတ်….ပြွတ်…ဗြစ်….ဗြစ်…..” နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူ အပြီးချင်းဆုံသွားကြသည်။ ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ လီးကြီးတစ်ချောင်းလုံး တဆတ်ဆတ် တုန်သွားပြီး သုတ်ရည်တွေ ဒလဟော သဲအိဖြူ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်သည်။ သဲအိဖြူမှာလည်း တစ်ကိုယ်လုံး ကော့ပြန်ကာ တုန်တက်သွားပြီး စောက်ပတ်ထဲ စောက်ရည်တွေ တာကျိုးသလို ဒလဟော ပန်းထွက်ကျလာသည်။
အပြီးချင်း ဆုံသွားသည့်အတွက် နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ သုတ်ရည်တွေမှာ ပြည့်လျှံသွားပြီး သဲအိဖြူ၏ စောက်ပတ်ထဲမှ ယိုစီးကာ ဦးမောင်မောင်ဦး၏ ဆီးခုံပေါ်တွင် အရည်တွေ စိုရွှဲကုန်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးမှာ စိတ်တူကိုယ်တူလိုးလိုက်ရသည့်အတွက် မောသွားကာ ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုစလုံးမှာလည်း ငြိမ်ကျသွားသည်။ သဲအိဖြူမှာ ဦးမောင်မောင်ဦး၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် မှောက်လျက် အိပ်ကာ အနားယူရင်း မချွတ်ရသေးသည့် ဦးမောင်မောင်ဦး၏ တောင်မတ်နေဆဲ လီးကြီးကို စောက်ပတ်အတွင်းသားများဖြင့် စုပ်ညှစ်လိုက်ပြီး ကားအယ်နေသောဖင်ကြီးကို စကောဝိုင်း ဝိုင်းကာ လှုပ်ခါကစားပေးရင်း လီးကြီးထဲမှ သုတ်ရည်အကြွင်းအ ကျန်များကို စုပ်ယူနေသည်။ “ ဦး….ဦး ကိုလေ…သဲအိ အရမ်းချစ်သွားပြီ သိလား….” “ ဦးလည်း သဲအိ လိုပါပဲကွယ်….သဲအိကို အရမ်းချစ်တယ်….” “ တကယ်လားဟင်…မယုံပါဘူးနော်….” “ တကယ်ပြောတာပါ သဲအိရယ်….သဲအိက အရမ်း အပေးကောင်းတာပဲ….ဒါကြောင့် သဲအိကို ချစ်ရတာ….” “ တော်ပါ…အပိုတွေ….” “ သဲအိ…” “ ရှင်….” “ ဦး လိုးပေးတာ ကောင်းလားဟင်….” “ တော်ပြီ….ဘာတွေလာမေးနေမှန်းမသိဘူး….” “ ပြောနော်…မပြောရင် ဆက်လုပ်မှာ….” “ မလုပ်ပါနဲ့တော့ ဦးရယ်….သဲအိ တစ်ကိုယ်လုံးနှုံးနေပြီ….” “ ဒါဆို ပြောလေ….” “ အင်း…အရမ်းကောင်းတယ်…” သဲအိဖြူမှာ စောက်ပတ်အတွင်းသားများဖြင့် လီးကြီးကို ဆွဲစုပ်ညှစ်ယူရင်း သုတ်ရည်အကြွင်းအကျန်များ ညှစ်ယူကာ စောက်ပတ်ထဲမှလည်း စောက်ရည်များကို ကုန်စင်အောင် ညှစ်ထုတ်နေမိသည်။ ဦးမောင်မောင်ဦးမှာ စောက်ပတ်ထဲမှ စုပ်ညှစ်ထားသည့်အတွက် အားမလိုအားမရဖြင့် ဖင်ကြီးတွေကို ကိုင်ပြီး တစ်ချက်ကော့တင်ဆောင့်ပစ်လိုက်ပြန်သည်။ “ ဦး…တော်ပြီကွာ….အင်း….ဟင်း….” ခရာတာတာပြောလိုက်သော သဲအိဖြူ၏ စကားအဆုံးမှာတော့ ဦးမောင်မောင်ဦးက သဲအိဖြူ၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို ငုံစုပ်လိုက်သည်။ အတန်ကြာအောင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ကာ လျှာချင်းကလိ၍ အပြန်အလှန်နမ်းနေ ကြသည်။
သဲအိဖြူမှ စ၍ နှုတ်ခမ်းချင်း ဆွဲခွာလိုက်သည်။ “ ပြွတ်….ပလွတ်….” “ ဦး….” “ ဟင်….” “ သဲအိ ကို ချစ်တယ်ဆို နေ့တိုင်း လုပ်ပေးရမှာနော်….” “ အင်းပါ….လုပ်ပေးမှာပေါ့….” “ မာမီလေးကို မလုပ်နဲ့တော့နော်….သဲအိကိုပဲ လုပ်ပေး….” “ အင်းပါကွယ်….” စကားသံတွေအဆုံးသတ်သွားကြပြီး တိတ်ဆိတ်သွားကြသည်။ ဦးမောင်မောင်ဦးက သဲအိဖြူ၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြန်၍ နမ်းလိုက်ရင်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မျက်နှာချင်း ပူးကပ်သွားကြသည်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တင်းကြပ် စွာဖက်လျက် နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ကာ လျှာချင်းကလိရင်း အပြန်အလှန်အနမ်းတွေ ခြွေနေကြသည်။ ခင်မေချစ်တစ်ယောက် အခန်းထဲက မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်း ဒူးတွေ မခိုင်ချင်တော့ စောက်ပတ်ထဲမှ ယားလာပြီး ခံချင်စိတ်တွေ ပြင်းပြလာသည်။ စောက်ရည်ကြည်တွေကလည်း တစိမ့်စိမ့်ထွက်၍ ပေါင်တံတစ်လျှောက် ယိုစီးကျလာသည်။ တံခါးဘောင်နံရံကို မှီရင်း မျက်လုံးလေးတွေမှေးကား လက်တစ်ဖက်က နို့အုံတွေကို အကျ င်္ီပေါ်မှ ဆုပ်နယ်ရင်း လက်တစ် ဖက်က စောက်ဖုတ်ကို ထဘီပေါ်မှ အုပ်ကိုင်၍ ဖိပွတ်နေမိသည်။ တဖြေးဖြေး ရမက်စိတ်တွေက ပြင်းပြလာသည်။ စောက် ရည်ကြည်တွေက အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲတွင် ရွှဲနစ်နေပြီး ထဘီမှာ အရည်တွေ စိုကုန်သည်။ အခန်းထဲက ဦးမောင်မောင်ဦး နှင့် သဲအိဖြူမှာလည်း ကာမပန်းတိုင် ထိပ်ဆုံးရောက်ရှိဖို့အရေး သဲကြီးမဲကြီး လိုးနေကြသည်။ မြင်ရသည့် မြင်ကွင်းက ရမက် ကြွစရာမို့ စိတ်တွေကို ဘယ်လိုမှ ထိန်းချုပ်လို့မရတော့။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် အခန်းထဲသို့ ဇွတ်အတင်းဝင်သွားပြီး သဲအိဖြူနေရာ တွင် ဝင်၍ အလိုးခံချင်စိတ်တွေ အပေါ်မှ အားရပါးရ တက်လိုးပစ်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဒီလိုလုပ်လို့ မဖြစ်သေးပါဘူးလေဟု အသိစိတ်က ပြန်ထိန်းလိုက်သည်။ မဖြစ်သင့်တာ မလုပ်သင့်တာကို မလုပ်ဖို့ အသိစိတ်နဲ့ ထိန်းချုပ် လို့ရပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက တောက်လောင်နေတဲ့ ကာမရမက်မီးကိုတော့ ထိန်းချုပ်လို့မရပေ။ စောက်ဖုတ်ကို ထဘီပေါ်မှ အုပ်ကိုင်ကာ ဖိပွတ်နေရသည်ကို အားမရတော့။ ခါးမှ ထဘီကို ဖြည်ချလိုက်သည်။ လက် ကို အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲသို့ နှိုက်၍ စောက်ဖုတ်ကို ဖိပွတ်နေမိသည်။ မှေးထားသော မျက်လုံးများကို ဖွင့်၍ အခန်းထဲသို့ ကြည့်ရင်း စောက်ဖုတ်ကို ကလိနေမိသည်။
စောက်ရည်တွေက ရွှဲကနဲ ရွှဲကနဲ ထွက်လာကြသည်။ အခန်းထဲမှာ ပြီးခါနီး အပြန်အလှန်ဆောင့် ဆောင့်လိုးနေတာကို မြင်လိုက်ရတော့ ရမက်စိတ်တွေက ဟုန်းကနဲ ကြွကာ စိတ်တွေ အဆမတန် ထကြွလာသည်။ စောက်စိကို လက်ညှိုး လက်မနှင့် ပွတ်ချေရင်း စောက်ပတ်ထဲသို့ လက်ခလယ် ထိုးထည့်ကာ ကလိပေးနေမိသည်။ လက်တစ်ဖက်မှာလည်း နို့အုံတွေကို အားရပါးရ ဆုပ်ချေနေမိသည်။ ခင်မေချစ်တစ်ယောက် အခန်းဝမှာ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေသည်။ အခန်းထဲက မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်း လက်ခလယ်ကို စောက်ပတ်ထဲထည့်ကာ ထုတ်ချီသွင်းချီ လုပ်နေမိသည်။ အခန်းထဲမှာ သဲအိဖြူက အပေါ်စီးမှ အားရပါးရ တက်ဆောင့်နေ တာဖြစ်ပြီး ကြည့်နေတာကလည်း သူလိုကိုယ်လို မိန်းမသားဖြစ်သည့်အတွက် ပိုပြီး ရမက်ထန်စရာဖြစ်နေသည်။ သဲအိဖြူ ဆောင့်သလို တက်ဆောင့်ချင်စိတ်တွေ ပြင်းထန်လာသည်။ ဒီအချိန် ခင်မေချစ် အနားကို ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် ရောက်သွားရင်တောင် တွန်းလှဲပြီး တက်လိုးမိမလား မပြောတတ်။ အခန်းထဲမှ နှစ်ဦးစလုံးမှာ ပြီးခါနီးအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိ နေပြီး သဲအိဖြူမှာလည်း ဖင်ကြီးကိုအားနှင့် ဆောင့်ချကာ အားရပါးရလိုးနေတာကို မြင်နေရသည်။ ခင်မေချစ်လည်း အခန်းထဲက လူနှစ်ဦးလို ကာမအထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်ခါနီးဖြစ်လာပြီး ပြီးချင်လာသည်။ လက်ခလယ်ကို စောက်ပတ်ထဲသို့ အားနှင့် ဆောင့် ဆောင့်ပြီး ထိုးထည့်သည်။ စောက်ပတ်ထဲမှ ရွနေအောင်ယားတက်လာကာ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာပြီး မျက်လုံးလေးများ မှေးစင်းကျလာသည်။ “ အား…ဟား….ဗြစ်….ပြွတ်….ဗြစ်….အား….အ…ထွက်…ထွက်ကုန်ပြီ ဦးရဲ့….အား….” “ အား…သဲ…သဲအိရယ်….ကောင်း….ကောင်းလိုက်တာ….ဦးလည်း…ပြီး…ပြီး…အား….အ…အ….” ဆိုတဲ့ အသံတွေ ကြားလိုက်ရချိန်မှာတော့ ခင်မေချစ် မျက်လုံးဖွင့်ပြီး အခန်းထဲသို့ကြည့်လိုက်မိသည်။ အခန်းထဲတွင် သဲအိဖြူက ဦးမောင်မောင်ဦးအား အားရပါးရ ဆောင့် ဆောင့်ပြီးလိုးနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသလို ဦးမောင်မောင်ဦးကလည်း သဲအိဖြူကို အောက်မှ ပြန်၍ အားရပါးရ ပင့်ဆောင့်ပေးနေတာ မြင်လိုက်ရသည်။
ခင်မေချစ် တစ်ယောက် ကာမအထွဋ်အ ထိပ်သို့ရောက်ပြီ။ မိမိကိုယ်ကို သဲအိဖြူနေရာတွင် ဝင်၍ခံစားလိုက်ပြီး သူမကိုယ်တိုင် ဦးမောင်မောင်ဦးအား အပေါ်မှ တက်ပြီး အားရပါးရ ဆောင့် ဆောင့်လိုးပေးနေသည်ဟု ခံစားရင်း စောက်စိကို လက်ညှိုး၊ လက်မဖြင့် ဖိပွတ်ချေကာ လက်ခလယ်ကို အားပြင်းပြင်းဖြင့် စောက်ပတ်ထဲသို့ ထုတ်ချီသွင်းချီ (၁၀)ချက်လောက် အထုတ်အသွင်း လုပ်လိုက်ပြီးချိန်မှာတော့ ခင်မေချစ် တစ်ကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားကာ ကော့ပြန်သွားပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ဒူးထောက်၍ ညွတ်ကျသွားသည်။ နို့အုံပေါ်ပွတ်ချေ နေသော လက်တစ်ဖက်ကို တံခါးဘောင်နံရံသို့ ပြောင်းရွေ့ကာ အားပြုကိုင်လိုက်ပြီး နောက်ဆုံးဆောင့်ချက်အဖြစ် လက်ခ လယ်ကို စောက်ပတ်ထဲ အားရပါးရ ဆောင့်ထည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ တစ်ကိုယ်လုံးအားယုတ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပြီး စောက်ရည်တွေ ပွတ်ကနဲ ပွက်ကနဲ ထွက်ကျကုန်သည်။ စောက်ပတ်ထဲ ထည့်သွင်းထားသော လက်ခလယ်ကို ဆွဲမထုတ် သေးဘဲ လက်ခလယ်ကို လီးအဖြစ်မှတ်ယူ၍ စောက်ပတ်အတွင်းသားများဖြင့် ဆွဲညှစ်ကာ စောက်ရည်တွေကို ညှစ်ထုတ်နေမိသည်။ အခန်းထဲက နှစ်ဦးမှာ အပြီးချင်းဆုံ၍ ငြိမ်ကျသွားသလို ခင်မေချစ်လည်း ငြိမ်ကျသွားသည်။ ခင်မေချစ် ထဘီမှာ စောက်ရည်တွေ ရွှဲနစ်နေပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလည်း အိုင်ထွန်းနေသည်။ သို့သော် ခင်မေချစ် အခန်းထဲသို့ မပြန်နိုင်သေး။ သူတို့တွေ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာ သိချင်နေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဦးမောင်မောင်ဦးနှင့် သဲအိဖြူတို့ အပြန်အလှန် ချစ်တင်းနှောသံတွေ ကြားလိုက်ရသည်။ ခင်မေချစ် တစ်ယောက် အူနုကျွဲခတ်သလို ခံစားလိုက်ရပြီး ရင်ထဲ ဘလောင်ဆူသွား သည်။ ခင်ပွန်းလောင်း ကိုမောင်မောင်ဦးကိုလည်း သစ္စာမဲ့လိုက်လေခြင်း သမီးဖြစ်သူအပေါ်တွင်လည်း အရှက်မရှိလေခြင်းဟု တွေးရင်း ရင်ထဲမှာ စို့နင့်ကြေကွဲစွာဖြင့် မျက်ဝန်းအိမ်မှ မျက်ရည်တွေ ပါးပြင်ပေါ်သို့ ယိုစီးကျလာပြန်သည်။
သဲအိဖြူ နောက်ဆုံးပြောလိုက်သည့် “ ဦး….သဲအိကိုပဲ လုပ်နော်….မာမီလေးကို မလုပ်နဲ့တော့….” ဟူသည့် စကားက ခင်မေချစ် ရင်ကို ဆောင့်ကန်လိုက်သလို ခံစားရစေသည်။ “ သြော်….သမီးလေးရယ်….” ဟူ၍ တိုးတိတ်စွာ ရေရွတ်ရင်း ရင်ထဲက စို့နင့်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေကြားမှာ စကား လုံးတွေက ထွက်ပေါ်မလာတော့။ အသံမထွက်အောင် ကျိတ်၍ ငိုရှိုက်ရင်း ပါးပြင်ပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျ လာသည်။ အခန်းထဲမှ စကားသံတွေ တိတ်ဆိတ်သွားကြပြီး “ ပြွတ်….ပလွတ်….ပြွတ်…” ဆိုတဲ့ အသံတွေနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အနမ်းတွေ ခြွေနေကြချိန်မှာတော့ ခင်မေချစ် တစ်ယောက် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အိုင်ထွန်းနေတဲ့ စောက်ရည်တွေ ကို ထဘီအောက်စဖြင့် ပွတ်သုတ်ပစ်လိုက်ရင်း လေးလံတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ အိပ်ခန်းဘက်ဆီကို ပြန်ပြီး ခြေဦးလှည့်ကာ လှမ်း လာနေမိသည်။ သူမ အိပ်ခန်းဆီသို့ လှည့်ပြန်လာသည့်တိုင် အခန်းထဲမှ “ ပြွတ်…ပလွတ်…ပြွတ်….ပလပ်…ပြွတ်…ပြွတ်….” ဟူသော အနမ်းခြွေသံများကတော့ တိတ်ဆိတ်မသွားသေးပေ။ အခန်းထဲမှ ဦးမောင်မောင်ဦးနှင့် သဲအိဖြူမှာတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ကာ အနမ်းတွေခြွေနေဆဲ။ သူတို့ကို တိတ်တဆိတ်ချောင်းကြည့်ကာ ရင်ထဲမှာ စို့နင့်ကြေကွဲစွာခံစားရင်း မျက်ရည်တွေနဲ့ နောက်ပြန်လှည့်သွားရရှာတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ သူတို့ ဘယ်တော့မှ သိနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပေ။ ပြီးပါပြီ။